အစရှိနောကျနောငျ – My Blog
စာကိုသခြောမလုပျဘူး စာကိုစိတျမဝငျစားဘူး မနကေ့တညျးက သခြောသငျပေးတာ အာရုံကဘယျကိုရောကျနတောလညျး ပွောစမျး ဆိုပွီး ခေါငျးကိုဒေါကျခနဲ ခေါကျခံထိရငျး အောငျမွငျ့မွတျ တဈယောကျခေါငျးလေးပှတျရငျး အားးး သပေါပွီဗြာ နာလိုကျတာ ဝသနျ ကလညျး မတရားပဲ ခေါကျပဈတာ သူ့အသားမဟုတျတိုငျး မညှာဘူး ဘာ ဝသနျ ငါ နငျ့ထကျ အသကျ ၁၃နှဈလောကျကွီးတယျ နားလညျလား ပွီးတော့ ငါ့ အလယျတနျးပွကြောငျးဆရာမတဈယောကျဆိုတာ သိထားအုံး အောငျမွငျ့မွတျ နငျ့ က အခုမှ 9တနျးကြောငျးသားနျော ရိုရိုသသေဆေကျဆံ မကွိုကျဘူး ငါ့မိတျဆှတေဈယောကျက အကူအညီတောငျးလို့ နငျ့ကို စာလာသငျပေးတာ သဘောပေါကျနျော ငါကြူ ရှငျသငျတဲ့ ဆရာမ မဟုတျဘူး သဘောပေါကျထား ကွားလား ပိုကျဆံရဖို့ ငါကြူ ရှငျ မသငျဘူး မမေကေသငျပေးလိုကျပါဆိုလို့ငါစာလာသငျနတောနျော နားလညျထား ကမြ ဝသနျ ဟောကျလိုကျတော့။
မကျြနှာငယျလေးနဲ့ကမြကိုကွညျ့နတေဲ့ အောငျမွငျ့မွတျ ပါးစပျဖြားက ထှကျကလြာတဲ့ စကားမြားကို သငျခနျးစာ စာအုပျလေးကိုငျရငျး မတျတပျရပျပွီး အသကျရှုဖို့ပါ မသှေ့ားပါတယျရှငျ စာတှေ လုပျပါတယျ စာတှလေညျးအရငျကထကျပိုကကျြပါတယျ ဝသနျ ကြောငျးစာအုပျထုကျလိုကျတိုငျး စာအုပျတှမှော ဝသနျ ပုံတှပေဲ ပျေါနတေယျ စာရှကျတှလှေနျ့လိုကျတိုငျး ဝသနျ အပွုံးတှပေဲ မွငျနရေတယျ စာတှကေကျြမရလို့ အိပျယာမှာအိပျခြ လိုကျတော့လညျး မကျြနှာကကျြမှာပွုံးပွုံးလေး ကွညျ့နတေဲ့ ဝသနျ ကွောငျ့ အိပျမရပွနျဘူး အာရုံအမွငျ တဈခုလုံး ဝသနျပဲဖွဈနတော ဆရာမ သိရဲ့လား နဘေ့ကျကြောငျးထကျရတာ မပြျောဘူး ကြောငျးဆငျးခြိနျ ဝသနျ ကြူ ရှငျလာခြိနျလေးကို မြှျောနမေိတာ စိတျတှပေငျပနျးလှနျးနတော ဆရာမသိရဲ့လား ဝသနျ စာသငျနလေညျး ဝသနျ လှုပျရှားမှုဟနျပနျလေး ခိုးကွညျ့နရေတာ အမောပါ ဝသနျ နဲ့စာသငျရတဲ့အခြိနျအခိုကျအတနျ့လေးက။
တကယျ့ကို ပြှျောရှငျရငျခုနျရတဲ့ကာလလေးတဈခုပါ အသကျဘယျလောကျပဲကှာကှာ မကျြစိထဲ ရှယျတူလေးလိုပဲ ခံစားရတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဝသနျ လို့ပဲ ချေါမိတာပါ နနေ့ညေ့ည မလေို့မရတာ စိတျထဲအခြိနျပွညျ့နရောယူနတော ဘာဖွဈလို့လညျး ဝသနျ သိရငျဖွပေေးပါလား ဝသနျ ရယျ ဘုရား ဘုရား ကမြ ဘာဆိုဘာမှမပွောမိပဲ အံ့သွမှငျသကျစှာ အောငျမွငျ့မွတျကို စိုကျကွညျ့မိရငျး ထပျမံ၍ ထှကျပျေါလာသော စကားသံကို ကမြဝသနျ ထပျပွီးနားတောငျမိပါတော့တယျရှငျ ဝသနျ ဖွစေရာမရှိဘူး မဟုတျလား ဖွစေရာလားရှငျ အသကျသာငယျတယျ ပွောခကျြကလကျလနျ့နပေါပွီရှငျ စိတျထဲပွောမိရငျး ဖွစေရာမရှိလညျး ထပျမေးပါ့မယျ ဝသနျ ဖွနေိုငျရငျဖွပေေါ့ မသိရငျ ပွောပုံက ကမြ က သူ့တပညျ့မလေးကနြတောပဲရှငျ စိတျထဲပွောရငျး ရှငျစောပု မိဖုရားကွီးက ဘာဖွဈလို့ ယောကျြ င်္ားမယူတာလညျး သိလား ဝသနျ ဘုရား ဘုရား ကြောငျးသားအရှယျ ပွောတဲ့စကားလား။
ကမြ မကျြလုံးပါပွူးသှားပွီး သိခငျြစိတျကလေးဖွဈသှားလို့ ငါ မသိဘူး အောငျမွငျ့မွတျ ပွောကွညျ့လေ ကမြ ဆရာမသာဖွဈလာတယျ ရှငျစောပု ဘာကွောငျ့ ယောကျြ င်္ားမရတာလညျး တကယျမသိခဲ့ပါဘူးရှငျ ကမြ တကယျကို စိတျဝငျစားစှာ မေးလိုကျမိပါတော့တယျရှငျ။ ရှငျစောပု ယောကျြ င်္ား မရတာ မိဖုရားကွီးဆိုတဲ့ဂုဏျထူးကို ဆန်ဒနဲ့သိက်ခာကို ထိနျးသိမျးနလေို့ ယောကျြ င်္ားမရခဲ့တာပါ ဘယျလောကျသနားစရာကောငျးတဲ့ ရှငျစောပု မိဖုရားကွီးလညျး သီးခြိနျတနျသီး ပှငျ့ခြိနျတနျမပှငျ့ ခဲ့ရတဲ့ သူ့ခမြှာ သိပျသနားစရာဘယျလောကျကောငျးမလညျး ဝသနျ တံခှနျမရှိတဲ့ဘုရား လငျမရှိတဲ့ မိနျးမ မတငျ့တယျဘူး ဆိုတာ ကွားဖူးမှာပါနျော ဝသနျ ကမြလညျး ယောငျပွီး ခေါငျးငွိမျ့မိရငျး ထပျပွောနသေော စကားသံကို ဆကျ၍သာနားတောငျမိပါတော့တယျ ဝသနျလညျး ဆရာမဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကိုမထေ့ားပါ အသကျအရှယျတှကေိုလညျး ခဏမထေ့ားပါ ကြောငျးသားနဲ့ဆရာမ ဘောငျတှကေိုမပြေ့ောကျထားပါ။
ရှငျစောပု လို ဘဝခရီးလမျးမှာ အထီးမကနျြစဖေို့ တငျ့တယျသော မိနျးမတဈယောကျဖွဈစဖေို့ ကနြျော အခဈြကို လကျခံပေးပါ ကနြျော ဝသနျ ကို သိပျခဈြတယျ။ ဘာ! ကမြ ကို ခြာတိတျ တဈယောကျက လှညျ့ပတျရညျးစားစကား ပွောတာကို အငိုကျမိခံလိုကျရလို့ ရှကျစိတျကမှနျထူသှားပွီး လကျထဲစာအုပျကွမျးပွငျထကျပွုတျကသြှားပွီး ဒေါသနဲ့ခွလှေမျးသှားလိုကျပွီး လကျကိုမွှောကျလိုကျပွီး ပါးကို ရိုကျဖို့ ရှယျလိုကျစဉျ စာသငျခုံကနေ ထိုငျရာကလုံးဝမထပဲ အောငျမွငျ့မွတျ မကျြနှာလေးမော့ပေးထားရငျး မကျြလုံးလေးမှိတျထားရငျး ရိုကျပါ ရိုကျပါ ဝသနျ ဝသနျ ရိုကျလို့ နာကငျြရလညျး မကျြနှာအရပွေားမှာ ခဏပါ ရိုကျပါ ရိုကျလိုကျစမျးပါ ရိုကျလေ ရိုကျ ပါးကိုရိုကျခလြိုကျစမျးပါ ဝသနျဆိုပွီး ထိုငျရာက ကနြျော မတျတပျရပျပွီး ဒီမှာ ဝသနျ ဆိုပွီး ကနြျော နဲ့ ဝသနျ အကွညျ့မကျြလုံးခွငျးဆုံပွီး ဝသနျ မငျးကွောငျ့ ကနြျော အသဲနှလုံးအတှငျးတောငျ့တဈနရောထိ မငျးအကွညျ့တှစေူးစိုကျနတောကွာနပွေီ ဆိုတာသိရဲ့လား။
ပါးရိုကျမှ နာကငျြရမယျဆိုလညျး ခံလိုကျမယျ ဝသနျ ကနြျော အသဲနှလုံးထဲ ခဈြမိလို့ တဈယောကျတညျး ကွိတျမှိတျနရေတာက ပါးရိုကျခံထိတာထကျ ပိုလို့နာကငျြနပေါပွီ ဝသနျ ရိုကျလေ ရိုကျပါ အားမနာပါနဲ့ ရိုကျလိုကျပါ တသကျစာ အမှတျတရအဖွဈ ယုယုယယသိမျးထားခငျြလို့ပါ ဝသနျ ရိုကျ ရိုကျ ရိုကျ သအေောငျရိုကျလိုကျစမျး ဝသနျ အျောဟဈပွောဆိုနသေော ခြာတိတျမကျြဝနျးမှာ ရီဝနေရေငျး ကသြှားတဲ့မကျြရညျတဈပေါကျကိုမွငျလိုကျပွီး ကမြ ရငျထဲ တဈခုခုကို ဆှဲနှုတျလို့ ခြာတိတျ ယူသှားပါပွီရှငျ။ မွှောကျထားတဲ့လကျကိုရုတျလို့ အခနျးထဲကထှကျဖို့ခွလှေမျးပွငျလိုကျစဉျမှာ ဝသနျ အဖွတေဈခုခု ပေးခဲ့ပါ ကနျြနသေူကို အသိအမှတျပွု သေးရငျ တဈခုခုပွောခဲ့ပါ ကနြျောကို ကြောပေးနတေဲ့ ဝသနျ ဆီက စကားလေးကို ကွားလိုကျရပါတော့တယျဗြာ ဝသနျ ကို တကယျခဈြတာသခြောလား အရငျစဉျးစားပါ ပွီးရငျ ပတျဝနျးကငျြက ဆရာမနဲ့တပညျ့ စကားဝဖေနျကဲ့ရဲ့တာခံနိုငျလား ထပျစဉျးစားပါ။
ဘာဖွဈဖွဈ တသကျလုံး ခဈြနိုငျရဲ့လား စဉျးစားပါ ဝသနျ ရငျထဲက အခဈြထကျ အောငျမွငျ့မွတျရငျထဲကအခဈြကိုပွနျဆနျးစဈပါ မနကျဖွနျ ဝသနျ စာလာသငျပါ့မယျ အဖွတေဈခု စဉျးစားလို့ မရတော့ရငျ မနကျဖွနျ နောကျဆုံးစာလာသငျပေးတဲ့နဖွေ့ဈသှားပွီ ဆိုပွီး အခနျးထဲက ထှကျသှားတဲ့ ဝသနျနောကျကို ပွေးလိုကျရငျး အျောချေါပမေဲ့ ဝသနျ ကနြျောကိုလှညျ့မကွညျ့ပဲ ဆိုငျကယျလေးအိမျထဲကမောငျးထှကျသှားပါတော့တယျဗြာ။ နောကျနကြေ့ောငျးသှားစာသငျလညျးစိတျကမပါ တနကေုနျလို့ညနစေောငျးတော့ ဆရာမလေး ဝသနျ စာသငျခြိနျကို ကနြျော ဧညျ့ခနျးမှာ ထိုငျစောငျ့နမေိပါတယျဗြာ ၁၅မိနဈခနျ့အကွာတှငျ ခွံထဲဝငျလာသော ဆိုငျကယျသံကွောငျ့ ကနြျောထိုငျရာကထလို့ အိမျရှတေံ့ခါးပေါကျကိုပွေးလို့ ဝသနျမကျြနှာလေးကို ထှကျကွညျ့မိပါတော့တယျ ရိုးရှငျးတဲ့သနပျခါးလေးနဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့ယဉျတဲ့ ဝသနျ ရဲ့အပွုံးတဈခကျြက ကမ်ဘာကြျောပွုံးအလှပိုငျရှငျ မိုနာလီဇာ နဲ့နှိုငျးယှဉျလိုကျရငျ။
ကနြျော မကျြစိထဲ မိုနာလီဇာအပွုံး က အလိုလို ကမ်ဘာမှာ ဒုတိယအလှဆုံးဖွဈသှားပါတော့တယျဗြာ အနားကအိမျထဲဝငျသှားသော ဝသနျကိုသတိမတားမိလိုကျပဲ အိမျတံခါးဘောငျကိုမှီရငျး ခွံထဲကိုသာသှငျသှငျကွီးကွောငျငေးကွညျ့နမေိပါတော့တယျဗြာ။ နောကျကြောကို လကျနဲ့ပုတျခံထိမှ ငေးငိုငျနတေဲ့ကနြျော လနျ့သှားပွီး နောကျကိုလှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ခြာတိတျ ဘာတှငေေးနတောလညျး ဝသနျ စကားကွောငျ့ ကနြျော မတျတပျကွီးအသကျရှုပါမသှေ့ားလောကျအောငျ ဝသနျ မကျြနှာလေးကို စိုကျကွညျ့ရငျး ပထမဆုံး ခြာတိတျ လို့ ဆရာမ ပါးစပျဖြားက အသုံးအနှုနျးလေး ရငျခုနျလိုကျတာဗြာ ဟာ ဘာကွောငျကွညျ့နတောလညျး ဝသနျ သိပျလှတယျ သိပျခဈြဖို့ကောငျးတယျ မညာပါဘူးတကယျ အသကျရှုဖို့မလေ့ောကျအောငျ ဝသနျ သိပျခဈြဖို့ကောငျးလှနျးနတေယျ ဟာ ဘာတှပွေောနတောလညျး ဦးနဲ့အနျတီ ကွားသှားအုံးမယျ ပွသနာပါပဲ ဖဖေနေဲ့မမေေ အပွငျသှားတယျ အိမျမှာဘယျသူမှမရှိဘူး ဝသနျ။
ဝသနျ အဖွပေေးပါတော့နျော ရူးတော့မယျ ကွာရငျ ဝသနျကွောငျ့ စားမဝငျ အိပျမရနဲ့အသကျပါသတေော့မယျ သနားပါ ဝသနျရယျ ကမြ ခြာတိတျ မကျြနှာလေးကိုကွညျ့လိုကျပွီး ခြာတိတျ ဝသနျ ပွောတာသခြောနားတောငျနျော ခြာတိတျ ဝသနျ နဲ့ ပတျသတျရငျ ပွသနာအမြားကွီးဖွဈလာနိုငျတယျ။ ပတျဝနျးကငျြစကားတှထေကျ ဝသနျဘကျကအမွဲရပျတညျပေးနိုငျလား ဝသနျ ကို ဘာပဲဖွဈဖွဈ မပွောငျးလဲပဲ ခဈြနိုငျပါ့မလား ကမြ ရဲ့စကားသံလေး ပွီးဆုံးခြိနျရောကျမှ ဝသနျ ရဲ့ အခဈြသာရမယျဆိုရငျ အရာအားလုံးကိုရငျဆိုငျရဲပါတယျ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဝသနျသာဘေးနားရှိရငျ ထာဝရအဆုံးထိ ဘဝခရီးကိုဖွတျသနျးခငျြပါတယျ ဖွဈလာသမြှ အဆိုးအကောငျး ဝသနျဘကျကအမွဲရပျတညျနပေါ့မယျ အေးစကျသောမကျြလုံးမြားနဲ့ နှလုံးသားထဲကလြှံကလြာတဲ့စကားလုံးမြားကို ကမြနားတောငျမိရငျး ခေါငျးငုံနသေော ခြာတိတျ ရဲ့လကျကို အလိုလို ကမြ ဆုပျကိုငျမိလိုကျတော့ အံ့သွခွငျးတှအေပွညျ့နဲ့။
စိုကျကွညျ့နသေော ခြာတိတျရဲ့နဖူးလေးကို ကမြခွဖြေားလေးတောကျလို့ နမျးလိုကျမိပါတော့တယျရှငျ မသိစိတျရော အသိစိတျဆိုတာတှရေော ဆရာမ ဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျတှရေော ဘယျရောကျလို့ ဘယျပြောကျသှားမှနျး မသိတော့ပဲ ကမြ အသဲနှလုံးက စခေိုငျးရာတှနျးအားတဈခုကွောငျ့ ခြာတိတျ နဖူးကိုနမျးမိရငျး မောငျ ကို သိပျခဈြတယျ ပွောမိရငျး မောငျ့ ရငျခှငျထဲခိုဝငျရငျး မောငျ့ခါးလေးကို ကမြ တငျးကပျြစှာဖကျထားမိပါတော့တယျ။ အမှတျမထငျ တဈမိနဈတောငျ မကွာလိုကျတဲ့ အယုအယအနမျးနဲ့ ဝသနျရဲ့ခဈြစကားလေးကို အိပျမကျ မကျနသေူတဈယောကျလို့ မတျတပျရပျရငျး ရငျခှငျထဲရှိနသေော ဝသနျကို ပွနျလညျဖကျထားမိရငျး ဝသနျ ကို မောငျလညျး သိပျခဈြပါတယျ လို့ပွောရငျး ဝသနျ ဆံနှယျလေးကို နမျးရှိုကျလိုကျပါတော့တယျဗြာ မောငျ ဗြာ လှတျပါတော့ကှာ အိမျရှကွေီ့းမှာ ဝသနျ ရှကျတယျ ကနြျော ဝသနျ ကို ဖကျထားသော လကျကိုဖွလြှေော့ပေးလိုကျပါတော့တယျ။
မောငျ စာသငျရမယျ လာ ဆိုပွီး စာသငျခနျးရှိရာသို့ မောငျ့လကျကိုဆှဲလို့ ကမြ ချေါလာမိပါတော့တယျရှငျ မောငျ ထိုငျ စာသငျရမယျ ဝသနျ စကားလေးဆုံးတာနဲ့ ထိုငျခုံမှာမထိုငျပဲ ကနြျော ဝသနျကိုအတငျးဆှဲဖကျပွီး ရငျခငျြးအပျကာ ဝသနျခါးလေးကိုဖကျလိုကျပွီး ဝသနျ နှုတျခမျးပါးလေးကို ကနြျော မကျမောစှာ နမျးစုပျလိုကျပါတော့တယျ။ ခဈြတယျ ဝသနျရယျ အှငျးးးးးးးးပွှတျ ပွှတျ အငျးးးးး မောငျရယျ သိပျခဈြတယျ အငျးးးးးးပွှတျ ပလပျ ပွှတျ စာသငျခနျးထဲ စာကိုမသငျဖွဈတော့ပဲ ခဈြသူနှဈဦးရဲ့ အနမျးသငျခနျးစာ တ ပွှတျ ပွှတျ တ အငျး အငျးးး ညီးထှားသံလေး အနမျးသငျခနျးစာထဲ ဆရာမလေးဝသနျနဲ့ ကြောငျးသားလေး အောငျမွငျ့မွတျ တို့ လြှာနှဈခု တံတားလေးခငျးလို့ တဈဖကျကိုတဈဖကျ ကူးလူး ပေါငျးစပျရငျး အနမျးဋိကာ ဖှဲ့လို့ စာသငျခနျးလေးလညျး အခုတော့ အခဈြတှပွေညျ့နှကျလို့နပေါတော့တယျဗြာ အှငျး…အူး…အု… ပလပျ…… အငျး…အငျး…အသကျရှုမှနျးကပျြလောကျတဲ့အထိနမျးရှိုကျပွီးမှ အနမျးကို ရပျတနျ့လိုကျပွီး။
ဝသနျကို ကနြျော ရငျခှငျထဲဖကျထားမိရငျး ဝသနျ ပွောလေ မောငျ မောငျ ဝသနျကို ခှဲမနခေငျြတော့ဘူး မောငျတို့လကျထပျရအောငျ မောငျ ဝသနျ ကို ခဏလေးတောငျဝေးမနခေငျြတော့ဘူး ဖွဈခငျြတာဖွဈပါစေ မောငျတို့ခိုးပွေးကွရအောငျ မဖွဈနိုငျဘူး မဖွဈသငျ့ဘူး မောငျရယျ မောငျက အခုမှ ကိုး တနျး ကြောငျးသားအရှယျ ဝသနျ က ကြောငျးဆရာမတဈယောကျပါ စောငျ့ထိနျးရမဲ့စညျးတှေ ဘောငျတှရှေိပါတယျ။ မောငျ ဆယျ တနျး စာမေးပှဲအောငျပွီးရငျ ဝသနျ မောငျ့ကိုလကျထပျပါ့မယျနျော ကတိပေးတယျနျော မောငျ မဖွဈနိုငျဘူး ဝသနျ မောငျ့အနားမရှိရငျမနတေတျဘူး မောငျ သသှေားမှာနျော ဝသနျ မောငျ သတောမွငျခငျြရငျ ဝသနျ ဆကျငွငျးပါ စညျးတှေ ဘောငျတှေ မောငျမသိဘူး မောငျသိတာ တဈခုပဲ ဝသနျ ကို မောငျ သိပျခဈြတယျ ဝသနျ အနားမှာမရှိရငျ မောငျအနာဂတျလညျးမရှိတော့ဘူးဆိုတာပဲ မောငျ သတောမွငျခငျြရငျ ဝသနျ ထပျငွငျးဆနျပါ အနားကထှကျသှားလိုကျပါ။
ဝသနျ ကို ခွိမျးခွောကျတာမဟုတျဘူး မောငျ့ နှလုံးသားက မကျမကျမောမော တောငျးဆိုနတောပါ လို့ပွောရငျး ဒူးတောကျကရြငျး ကမြကို မော့ကွညျ့နတေဲ့ မောငျ့မကျြဝနျးထဲကမကျြရညျစတှကေို ကမြ ဝသနျ လညျး ဘယျလိုအငျအားမြိုးနဲ့ ဆကျ၍မကွညျ့နိုငျတော့ပဲမောငျ့အနားဒူးတောကျထိုငျခပြွီး မောငျကိုဖကျထားလိုကျပွီး မောငျ ဝသနျ မောငျ့အခဈြကို မငွငျးဆနျဝံ့ပါဘူး မောငျ အခဈြက ဝသနျ ဘဝတဈခုဖွဈသှားပွီ မောငျ အခဈြနဲ့ ဝသနျ အရာအားလုံးကို ရငျဆိုငျမယျ ဝသနျ တကယျပွောနတောလား တကယျပေါ့ မောငျ ပြှျောလိုကျတာ ဝသနျရယျ မောငျတို့ ဘဝတဈခုကိုဖနျတီးတညျဆောကျဖို့ လူတှနေဲ့ဝေးရာခဏလေး ပွေးကွမယျနျော ဆရာမ မောငျနျော ဘာ ဆရာမလညျး ရယျမောသံလေးမြားတိတျဆိတျသှားတော့ ဝသနျရော ကနြျော ရော ဘားအံမွို့လေးသို့ ခိုးပွေးသှားကွပါတော့တယျ။ ဘားအံကမျးနားလမျးတညျးခိုခနျးတဈခုမှာ တညျးခိုလိုကျပွီး ညနစေောငျးတော့။
တဈယောကျလကျတဈယောကျဆှဲလို့ ကမျးနားလမျးအတိုငျး လညှေငျးခံလမျးလြှောကျရငျး ရှယေဉျမြှျောဘုရားကိုတူတူဖူးမွှျောကွပွီး သံလှငျမွဈရဲ့ညနခေငျးဆညျးဆာကို တူတူလညှေငျးခံရငျး မောငျ ပွောလေ ဝသနျ မောငျတို့မိဘတှေ ခုခြိနျဆို တျောတျော ပွောလကျစ ကမြ နှုတျခမျးကို မောငျလကျကလေးမပွောဖို့ထားလိုကျရငျး ဝသနျ အားမငယျပါနဲ့နျော မမေနေဲ့ဖဖေေ စိတျဆိုးလညျး ခဏပါပဲနျော မောငျတို့အဆငျပွသှေားမှာပါနျော မောငျတို့ပွနျရအောငျနျော ဝမျးနညျးစရာမတှေးပါနဲ့ ဒီနညေ့လေးဟာ မောငျနဲ့ဝသနျရဲ့ မင်ျဂလာဦးအခဈြညလေးပါနျော မောငျနျော ဘယျလိုတှေ ပွောနတောလညျး ရှကျသှေးလေးဖွာနတေဲ့ ဝသနျ တဈယောကျတကယျ့ကို ဆယျကြျောသကျလေးလိုပဲ တကယျကို ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးလို့ ပါးပွငျလေးကိုကနြျော ဖကျနမျးလိုကျပါတော့တယျ။ အိုးးးးးး မောငျနျော ပွနျရအောငျနျော ဝသနျ မောငျ့သဘောပဲနျော ဘုရားပျေါကဆငျးလို့ ကမျနားလမျးကနတေဈဦးကိုတဈဦးခပျတငျးတငျးလေးဖကျထားရငျး။
လမျးလြှောကျလို့ တညျးခိုခနျးကိုပွနျလာခဲ့ကွပါတော့တယျ တညျးခိုခနျး အခနျးတံခါးကိုပိတျလိုကျပွီး အခနျးတံခါးဘကျကို ဝသနျ ကို ဆှဲကပျလိုကျပွီး ကနြျော ဝသနျနှုတျခမျးလေးကို နမျးစုပျလိုကျပါတော့တယျ အှနျးးးးးအူးးးးးး ပွှတျ ပလပျ ပွှတျ အငျးးးး ကနြျော လြှာလေးကို ဝသနျ လြှာလေးနဲ့ ထိတို့နှုတျခမျးလေးကို မှတျသိပျစှာစုပျနမျးရငျး ကနြျော ညာဘကျလကျနဲ့ ဝသနျရဲ့ညာဘကျနို့အုံလေးကိုအကြီ င်ျပျေါကအုပျကိုငျ ညဈကစားရငျး နှုတျခမျးခွငျး စုပျနမျးနပေါတော့တယျ အှငျးးးးး အငျးးးးးးအှငျးးးးးးးးပွှတျ အှငျးးးးးးအ နို့ကို ကိုငျစုပျညဈကစားနတေဲ့ကနြျော လကျက ပေါငျကွားက ဝသနျ စောကျဖုတျကို ထမိနျပျေါကအုပျကိုငျရငျးဖှဖှလေးပှတျသပျပေးလိုကျတော့ အားးးး မောငျ ရယျ ဝသနျ နရေခကျလိုကျတာ အသကျရှုမဝတော့ဘူးကှာ ဝသနျ စကား နားထဲမကွားတော့ဘူးဗြာ စောကျဖုတျကို ပှတျသပျပေးရငျး ထမိနျကို ကနြျော ခြှတျခလြိုကျပါတော့တယျ အိုး မောငျ ဆိုပွီး ဝသနျထမိနျလေးကိုလှမျးဆှဲပမေယျ့။
မမှီလိုကျပဲ ကွမျးခငျးမှာ အပုံလိုကျလထေမိနျလေးဖရိုဖရဲကဆြငျးသှားပါတော့တယျ။ အားးးးး မောငျရယျ ရှကျလိုကျတာကှာဆိုပွီး အောကျခံဘောငျးဘီကို လကျနဲ့ဖုံးအုပျရှကျနတေဲ့ ဝသနျကို ကနြေျာ့ စှခေ့နဲပှခြေီ့လိုကျတော့ အိုးးးးးးမောငျ အငိုကျမိသှားတဲ့ဝသနျကို ပှခြေီ့ထားရငျး ကုတငျပျေါ နှဈယောကျ ဘေးတစောငျးပဈခရြငျး ကုတငျပျေါတူတူပွိုဆငျးသှားကွပါတယျဗြာ အိုး အမေ့ မောငျ မောငျနျော လူကိုလနျ့သှားတာပဲကှာ သိပျဆိုးတာပဲ ဘာမှနျးလညျးမသိဘူးကှာ ဟှနျး ထိုးနတေဲ့မကျြစောငျးလေးက နှလုံးသားတညျ့တညျ့ကိုထိသှားလို့ ရငျခုနျနှုနျးလညျးထိနျးမရတော့လို့ ဝသနျနှုတျခမျးလေးကို ပွနျနမျး မိရငျး လကျကလညျး ဝသနျ အကြီ င်ျလေးကို ခြှတျခလြိုကျပွီး အနမျးလေးကိုရပျလိုကျပွီး ဝသနျ ဗိုကျပျေါကနြျော ဖှဖှလေးဖိထိုငျတားရငျး ဘျောလီခြိပျလေးဖွုတျလိုကျပါတော့တယျ။ ပှငျ့ထှကျလာသော ဝသနျ နို့သီးခေါငျး နီညိုရောငျသနျးနတောလေးက ခဈြစရာကောငျးလိုကျတာဗြာ။
အသညျးတှယေားလာလို့ နို့သီးခေါငျးလေးကို လကျညိုးနဲ့လကျမဖိညဈကစားရငျး လကျတဈဆုပျစာ ဝသနျနိုအုံလေးကို ဆုပျနှယျညဈကစားလိုကျတော့ အားးးးး မောငျရယျ ဝသနျ ရငျတှအေရမျးခုနျတယျကှာ ဝသနျ ကို အသသေတျနတောလား ကှာ နလေို့မတတျတော့ဘူးးးးး အားးးးးးးးမောငျရယျ မကျြလုံးလေးမှေးစငျးလို့ ကုတငျအိပျယာအခငျးကိုလကျနဲဆုပျကိုငျရငျး အသံလေးတိုးညှငျးစှာအျောညီးနတေဲ့ ဝသနျမကျြနှာလေးကို ကွညျ့လိုကျပွီး အရမျးခဈြတယျ ဝသနျလိုပွောရငျး ကနြျော ဝသနျအပျေါမှောကျခလြိုကျပွီး နီညိုရောငျလေး သနျးနသေော နို့သီးခေါငျးလေးကို လြှာလေးနဲ့တို့ထိကစားရငျး ကနျြနို့သီးခေါငျးလေးကိုလညျးလကျနဲ့ခကြေစားရငျး ရငျသားကိုအုပျကိုငျညဈကစားရငျး နှုတျခမျးလေးအသာအယာငုံလိုကျပွီး နို့သီးခေါငျးလေးကိုအာငှလေ့ေးပေးရငျး တပွှတျပွှတျ ကနြျော စုပျနမေိပါတော့တယျ ဝသနျကတော့ ကနြျော ဆံပငျလေးကို ဆုပျကိုငျထားရငျး အိုးးးးးးအားးးးးးးးကောငျးလိုကျတာ မောငျရယျ။
အားးးးအငျးးးးးဟူးးးးးးသိပျကောငျးတယျ မောငျ အ အမေ့ အိုးးးးးမောငျ မောငျရေ အိုးးးးးး ဝသနျ နို့လေးကို တပွှတျပွှတျနဲ့ စုပျနမျးရငျး ကနြျောလညျး အကြီ င်ျကိုခြှတျလိုကျပွီး အနမျးကိုရပျလိုကျပွီး ဝသနျ ကို မောငျ အရမျးခဈြတယျ သိလား သိပါတယျ မောငျရယျ မောငျခဈြတာထကျ ဝသနျ ခဈြတာကပိုပါတယျ သိလား မောငျကို ဝသနျ စာတှေ သငျပေးခဲ့တယျနျော။ အခုတော့ မောငျ ပွနျသငျပေးမယျ အခဈြသငျခနျးစာလေးတှေ ဝသနျသငျယူခငျြပွီ မောငျ သငျရိုးညှနျးတမျးမရှိတဲ့ မောငျ့အခဈြသငျခနျးစာလေးတှေ နတေို့ငျးသငျယူခငျြနပေါပွီ မောငျရယျ သိပျခဈြတယျ မောငျ အရမျးခဈြတယျ မောငျ မာနတှေ သိက်ခာတှပေါမကနျြတော့အောငျ မောငျ့ကိုခဈြမိခဲ့ရသူတဈယောကျပါ မောငျယုံပါတယျ သိပါတယျ နားလညျပါတယျ ဝသနျရယျ လိုဆိုပွီး ဝသနျ အောကျခံဘောငျးဘီလေးကို ဆှဲခြှတျလိုကျပွီး ဒူးလေးတောငျလိုကျပေးလိုကျခြိနျ စောကျဖုတျ မှေးခပျပါးပါးလေးနဲ့အဖုတျကို လကျနဲ့အုပျကာထားတဲ့။
ဝသနျလကျလေးကိုဘေးသို့ဆှဲဖယျလိုကျပွီး မရှကျပါနဲ့တော့ ဝသနျ ဆိုပွီး ကာထားတဲ့လကျကိုဘေးသို့ဆှဲဖယျခလြိုကျပွီး ကနြျောလညျး ဝသနျစောကျဖုကျအနားမကျြနှာလေးအပျလိုကျပွီး စောကျဖုတျနူတျခမျးသားကို လကျနှဈဖကျနဲ့ဆှဲဟပွဲလိုကျရငျး စောကျဖုတျ အတှငျးနံရံသားရဲရဲလေးကို လြှာလေးနဲ့ တပွကျပွကျ လြှကျလိုကျပွီး လြှာထိပျလေးနဲ့ ဝသနျစောကျစိကို ကလျောထိုး လြှကျစုပျပွီး ပါးစပျလေးနဲ့ ငုံထားရငျး စောကျစိကို မကျမကျမောမော တပွှပျပွှပျ နဲ့ စုပျနမျးနပေါတော့တယျ။ အားးးးးးအမရေ့ေ အားးးးလားးးးးးး မောငှ အူးးးးးးတျောပါတော့ တျောပါတော့ကှာ ရှီးးးးးသပေါပွီ အမေ့ အိုးးးးးလုပျတတျလိုကျတာကှာ မောငျရေ စုပျစုပျ ခပျကွမျးကွမျးလေး ဖိစုပျကှာ အားးးးးလားးးးးမောငျရေ ကောငျးးးးတယျ အိုးးးး ကနြျောလညျး ဘယျလိုမှမပွောတတျတဲ့အနံလေးက နှာခေါငျးဝကတိုးဝငျလာတိုငျး လီးကပါတောငျတောငျနရေငျး ဝသနျစောကျစိကိုဖိဖိစုပျရငျး လကျညိုးလေးကို စောကျဖုတျထဲထိုးထညျ့ကလိကစားရငျး။
စောကျဖုတျကွီးကို ငုံလို့သာ ကနြျော တပွကျပွကျ နဲ့ စုပျနမျးနမေိပါတော့တယျဗြာ စောကျဖုတျထဲကစိမျ့ထှကျလာတဲ့စောကျရညျလေးတှကေ ပါးစပျမှတဆငျ့ကနြျောလညျခြောငျးထဲပူနှေးစှာ စီးဝငျသှားပါတယျ အနံ့လေးမပွငျးပမေဲ့ စောကျရညျကို အရသာရှိစှာ ကနြျော မြိုခလြို့ လီးကလညျးပေါကျထှကျလုမတတျ အောကျခံဘောငျးဘီထဲရုနျးကနျနပေါတော့တယျဗြာ။ ဖငျလေးကော့ပြံရငျး ခါးလေးပါကွှကွှ စောကျရညျတှေ ဝသနျ ညဈညဈခရြငျး ထှကျလာသမြှစောကျရညျကွညျလေးမြားကို အငမျးမရ စုပျလို့ရသလောကျသောကျသုံးရငျး အားးးးး အိုးးးးးမောငှ ပှီးးးးပှီ အ အားးးး အားးးးးမောငျရေ အားးးးးထှကျကုနျပွီ အိုးးးးးမောငျ အားးးးးအငျ့ အငျ့ အီးးးးးးးးအငျ့ အားးးးးးမောငျ ရေ အိပျယာပျေါ ဖငျလေးပဈခလြိုကျရငျး ငွိမျ့ကသြှားတော့ စောကျရညျ လကျကနျြလေးမြားလြှကျလိုကျပွီး စောကျစိကို ပွှတျခနဲ ဆှဲစုပျလိုကျပွီး ပုဆိုးနဲ့ အောကျခံဘောငျးဘီ ဆှဲခြှတျလိုကျပွီး ဝသနျ ပေါငျကွား ဒူတောကျလိုကျပွီး။
လီးကို စောကျဖုတျနဲ့တတေ့ားပွီး စောကျစိလေးကိုလကျမလေးနဲ့ကနြျောဖိခရြေငျး ဖွညျးညှငျးစှာ စောကျဖုတျထဲတရဈခငျြးဖိသှငျးလိုကျတော့ မကျြလုံးလေးမှေးစငျးကရြငျး ဝသနျရဲ့အျောညီးသံလေးအခနျးထဲပြံလှငျ့လို့ မင်ျဂလာဦးညရဲ့တေးသံလေးတဈခုအဖွဈ အားးးး မောငျရယျ အအ အငျးးးးးးကောငျးလိုကျတာ ဖွေးဖွေးလေးလိုးပါ မောငျရယျ အားးး သိပျကောငျးတယျကှာ လိုးပါ မောငျရယျ ခဈြလိုကျတာမောငျရယျ အငျးး စောကျဖုတျထဲ ဝငျနသေောလီး က နှုးညံ့သော အတှငျးသားထဲစိမျ့ကလြာသော စောကျရညျမြားကွောငျ့ အဝငျအထှကျ လေး တဖွညျးဖွညျးလေး သှကျလာရငျး လီးကွောလေးမြား စိမျတကျလာအောငျ ကနြျောလညျး အကောငျးကွီး ကောငျးလာပွီး အိပျယာခငျးပျေါလကျတောကျကာ ခါးကလညျး ကွှကွှလာပွီး လီးကိုတဈဆုံး ဆောငျ့ထညျ့ရငျး လီးနဲ့စောကျဖုတျရိုကျခကျြအသံမြားနဲ့အခဈြရဲ့သာယာသံလေး ပေါကျထှကျလာပွီး အား…. ဝသနျ ရေ ခဈြတယျ အိုး….အ…အား…. လိုးလို့ကောငျးလိုကျတာ။
အ ဟူးးးးအငျ့ အငျ့ ဟာ အားးးးဝသနျ အိုးးးးမောငျ ခဈြတယျ ခဈြတယျ မောငျရယျ ခပျတငျးတငျးလေး စောကျဖုတျထဲ ဝငျနတေဲ့မောငျ့ လီးက တခကျြဆောငျ့လိုကျတိုငျး ကမြရငျထဲနငျ့နအေောငျ တကယျကိုကောငျးလှနျးလှပါတယျရှငျ။ ကမြ အတှကျ ဆရာမ ဆိုတဲ့ အရှကျကဘယျရောကျလို့ဘယျပြောကျကုနျမှနျး မသိအောငျ ပါးစပျဖြားက လိုးးးးးလိုးးးးးပါ အားးးးးးကောငှးနပှေီ ကှာ ခပျကွမျးကွမျးလေး ဆောငျ့လိုးပါကှာ အားးးးအီးးရှီးးးး တကိုယျလုံး ခြှေးတှေးပြံလို့ မောငျရဲ့လိုးဆောငျ့ခကျြကို သအေောငျလိုးစမျးပါ မောငျရယျလို့ အျောဟဈတောငျးဆိုမိသညျ့အထိ တစာစာအျောဟဈတောငျးဆိုမိသညျ့အထိ မောငျ့လိုးခကျြမြားအောကျ စောကျဖုတျက အရညျတောငျ့တောငျ့ ကလြာသညျ့အထိ ကောငျးနပေါတော့တယျရှငျအားးးးးး မောငျ ရယျ သအေောငျဆောငျ့လိုးပါ လိုးပါ ဝသနျ လာခငျြနပွေီ အီးးးးးအု အားးးးရှီးးးမောငျရေ အိုးးးးးအမေ့ အားးးးကောငျးတယျ အ အားးးး နှုတျခမျးလေးကို ဖိကိုကျထားရငျး။
ကြောငျးသားလေး မောငျ့ရဲ့လိုးခကျြမြားအောကျ ဆရာမလေး ကမြ ဝသနျ ဒူးတောကျလို့ လကျမွှောကျအရှုံးပေးလိုကျပါပွီရှငျ ဆောငျ့ခကျြကွမျးကွမျးကို ကမြ စောကျဖုတျ တဆဈဆဈ ကြိနျးစပျပူထူသှားလောကျတဲ့အထိ ကော့ပြံနလေောကျအောငျ အလိုးကို ခံရငျး စောကျရညျတှလြှေံကလြို့အိပျယာခငျးတဈခုလုံးရှဲနဈကုနျပါတော့တယျရှငျ ကမြ နို့အုံနှဈခုလုံးကို မောငျ့လကျနဲ့ စုံကိုငျအတငျးဆှဲညဈထားပွီး အားကုနျသုံးလို့ ဆောငျ့လိုး နို့ကိုငျပွီး မတရားဆောငျ့ဆှဲလိုးခကျြက ကမြအတှကျ နာကငျြမှုနဲ့ စောကျဖုတျက ကောငျးလှနျးတဲ့ခံစားခကျြနဲ့ရောယှကျလို့ မကျြလုံးကို မှိတျလို့ တဘုနျးဘုနျးနဲ့ ပဈဆောငျ့နတေဲ့ မောငျလညျး အား ………အမရေေ အား………မောငရှေ အားးးးးးးးးးးအီးးးးးအ အားးးး တဘုနျးဘုနျးနဲ့ပဈပဈဆောငျ့ရငျး ကနြျောလညျး ဝသနျအပျေါမှောကျကရြငျး စောကျဖုတျထဲ လရတှေေ တပဈြပဈြနဲ့ အရှိနျနဲ့ပနျးထှကျလို့ နှဈယောကျသားတဈယောကျကိုတဈယောကျဖကျထားရငျး။
ကာမရကွေောထဲ ထပျကာထပျကာ မြှောလို့နပေါတော့တယျဗြာ။ သာယာသောနရေ့ကျလေးအခြို့ဖွတျသနျးပွီးနျော မောငျကို မောငျမိဘတှအေမှဖွေတျစှနျ့လှတျလိုကျတဲ့သတငျး သတငျးစာထဲပါလာပါတော့တယျရှငျ ကမြ လညျး ပတျဝနျးကငျြရဲ့ကဲ့ရဲ့ခွငျး ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ နောကျဆုံး ဘားအံမွို့လေးသို့ပွောငျးရှစေ့ာတငျပွီး အခုတော့ ဘားအံမွို့လေးမှာ အိမျငှားနရေငျး မောငျ့ကိုကြောငျးပွနျထကျခိုငျးပွီး ကမြ ကတော့ ဆရာမအဖွဈ ကြောငျးသားတှကေိုစာတှဆေကျသငျနစေဲပါပဲရှငျ ပတျဝနျးကငျြရဲ့စကားမြားကို မောငျ့ကိုခဈြတဲ့စိတျတဈခုလေးနဲ့ အရာရာကိုကမြ ရငျဆိုငျရဲနပေါပွီရှငျ တဈနှဈပွီး တဈနှဈပွောငျးလို့ မောငျလညျး ၁၀တနျးအောငျလို့ သှားပါပွီရှငျ အလုပျလေးတဈခုလုပျခငျြတယျ ဆိုလို့ မိနျးမလုပျစာ စားရတာမြိုမကဘြူး မိနျးမကိုလညျးသနားလှပွီလို့ တဖှဖှပွောနသေော မောငျ့ကွောငျ့ ကမြ မောငျလုပျခငျြသော အကဉျြးဦးစီး ငှာနထဲဝငျသှားသော မောငျ့ကိုကွညျဖွူ စှာခှငျ့ပွု လိုကျပါတယျရှငျ။
နောကျတော့ ဝနျထမျးအိမျယာထဲ မောငျနဲ့ကမြ ပွောငျးနကွေရငျး သာယာသောဘဝလေးဖွဈလို့ အခုခြိနျမှာပွောနကေဲ့ရဲ့နသေောလူတှရေဲ့ပါးစပျတှလေညျးတဖွညျးဖွညျးပိတျလို့သှားပါတော့တယျရှငျ တာဝနျခြိနျ ယူနီဖောငျးနဲ့မောငျက သိပျကိုလိုကျဖကျလှနျးပါတယျရှငျ မိနျးမ ဘာတှေ စဉျးစားနတောလညျး ထမငျးစားလေ မောငျ့မိနျးမကတော့ အတှေးတှမြေားနပေါလား ပွော မိနျးမ ဘာမှမဟုတျဘူး မောငျရယျ ဝသနျ စားခငျြစိတျမရှိဘူး ဖွဈနတေယျ ဟိုဟာလညျး မလာဘူးဖွဈနတေယျ ရကျလညျးကြျောနပွေီ မောငျ ဟာ ဝသနျ မိနျးမ တကယျကွီးလား ဟားဟားးငါကှ ဟာ ဖွေးဖွေးအျောပါမောငျကလညျး ရှကျလိုကျတာ ပြျောသှားလို့ပါ မိနျးမကလညျး ဟားဟားးးး ရယျမောနသေော မောငျ့မကျြနှာလေးကိုကွညျ့ရငျး အပြှျောလေးတှပေါ ကမြ ရငျထဲကူးစကျလာပါတော့တယျရှငျ ရကျမှလပွောငျး အခုဆို သုံးလလောကျကွာပွီးနျော အားးးးးအမရေေ မောငျရေ ထပါအုံး ဝသနျ ဗိုကျထဲကမတရားအောငျ့ပွီးမတရားနားနတေယျ။
အားးးးးအမရေ့ေ ကယျပါအုံး အားးးးး မိနျးမ ဝသနျ မောငျ ဆေးရုံလိုကျပို့ပေးမယျ ဆိုပွီး ဆေးရုံသို့ အမွနျထှကျလာခဲ့ကွပါတော့တယျ ဆေးရုံရောကျတော့ စဈဆေးမှုအဆငျ့ဆငျ့ပွု လုပျကွပွီးနောကျ ဝသနျကို အရေးပျေါခှဲစိတျခနျးသို့ ပို့လိုကျကွပါတော့တယျဗြာ။ နောကျဆုံးတော့ ကနြျောရငျသှေးလေးပကျြကပြွီး ခှဲစိတျထုကျလိုကျရပါတော့တယျ ဆေးရုံကုတငျမှာ သတိမလညျသေးတဲ့ ဝသနျကိုကွညျ့ပွီး ကနြျောမကျြရညျလေးကရြငျး ခှဲစိတျဆရာဝနျကွီးရုံးခနျးသို့ထှကျလာပါတော့တယျဗြာ ဝငျခှငျ့ပွုပါ ဆရာ လာပါ ထိုငျပါဗြာ ဘာမြားသိခငျြလို့ပါလညျး ဒီလိုပါ ဆရာ ကနြျော မိနျးမ ဝသနျ ဘာကွောငျ့ ဒီလိုဖွဈရတာလညျး သိခငျြလို့ပါ အျော ပွောရမှာတော့ အားနာပါတယျ ရပါတယျ ပွောပါဆရာ အားမနာပါနဲ့ ညီးလေးတို့လငျမယား အိမျတောငျကတြုနျးက ကလေးမလိုခငျြသေးလို့ အပွငျမှာကိုယျဝနျဖကျြခဘြူးလား ဘာ ဆရာ ဘယျလိုပွောလိုကျတာလညျးဗြာ စိတျထိနျးအုံး ညီလေး ဆရာတို့အတှအေ့ကွုံအရ ပွောရတာပါ။
ညီလေး အခုဖွဈတဲ့ အခွအေနကေ ညီလေး မိနျးမ သန်ဓထေားဆေးအလှနျအကြှံ့သောကျထားလို့ဖွဈနိုငျသလို ကိုယျဝနျဖကျြခထြားဖူးလို့ သားအိမျကစောငျးနတောလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ညီလေး ညီလေး မိနျးမ ကို နကေောငျးပွီး ဆေးရုံကဆငျးမှသကျသာမေးကွညျ့ပါ ညီလေး ဆရာရှငျးပွပွောပွတာ နားလညျမယျလို့ယုံကွညျပါတယျ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာ ကနြျော နားလညျပါပွီ အခု ညီတို့ ကလေးရဖို့ အခွအေနဖွေဈလာတော့ ပုံမှနျမဟုတျတော့တဲ့ အခွအေနတေဈခုကွောငျ့ သှေးလုံးဖွဈပွီး ကလေးပကျြကတြာပါ နောကျထပျ သားသမီးထပျရဖို့အခွအေနသေိပျမရှိတော့ပါဘူး ညီ စိတျမကောငျးပါဘူး ညီ ဆရာလညျး လုပျစရာလေးတှရှေိသေးလို့ ညီ အျော ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာ ကနြျောကို ပွနျခှငျ့ပွုပါအုံး ကောငျးပါပွီဗြာ လိုအပျရငျ လာချေါလို့ရတယျနျော ကနြျော ခေါငျးငွိမျ့ပွရငျ ခှဲစိတျဆရာဝနျရုံးခနျးထဲကထှကျလာပါတော့တယျဗြာ တောကျ ဒေါသစိတျနဲ့ ခေါကျလိုကျသောကွောငျ့ လူတဈခြို့ကနြျောကို လှညျ့ကွညျ့သှားကွပါတော့တယျဗြာ။
ဆေးရုံဆငျးလို့ အခုတော့ ဝသနျလညျး အိမျသို့ပွနျရောကျနပေါပွီ ကနြျောလညျး စိတျကိုထိနျးခြုပျလို့နစေ့ဉျရကျဆကျ အရကျပုလငျးကိုအဖျောပွုလို့နတေတျလာပါပွီ တာဝနျခြိနျလညျး မှုးနပေါပွီ မနကျ နလေ့ယျ ည အခြိနျဆိုတာမခြိနျလောကျအောငျမူးရူးနပေါတော့တယျဗြာ။ သာရေးနာရေးလူမှုရေးအရာအားလုံးခေါငျးထဲဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ပါဘူး အရကျခှကျလေးမော့လို့ ရငျထဲကိုပူဆငျးသှားမှသှေးသားတှကေလှညျ့ပတျလို့ကောငျးတဲ့အဆငျ့ကို ကနြျော ရောကျနပေါပွီဗြာ မောငျ မောငျ ဘာလညျး ဘာလညျး နားငွီးတယျ နငျ့စကား ငါမကွားခငျြဘူး မပွောနဲ့ မပွောလို့ မဖွဈတော့ဘူး မောငျ မောငျကိုယျလညျးမောငျပွနျကွညျ့အုံး ပိနျခြူံးနပွေီ အရကျသမားလုံးလုံးကွီးဖွဈနပွေီ သိရဲ့လား ကွာရငျ မောငျအသကျပါတော့မယျ သိရဲ့လား မောငျ့ကိုခဈြလို့ ဝသနျပွောနရေတာပါ မလိုဘူး သသေေ ဝသနျ ငါ့မြှျောလငျ့ခဲ့တာမိသားစုဘဝလေးပါ အပွဈပွောနတော မဟုတျဘူး နငျ့ပှငျ့လငျးစှာ ငါ့ကိုမပွောပွခဲ့တာ။
ငါ့စိတျထဲအရမျးနာကငျြရတယျ ဝသနျ နငျ့လညျး ငါ့နဲ့ပတျသကျလို့အရှကျသိက်ခာမဲ့ရသလို ငါလညျး နငျနဲ့ပတျသတျလို့ မိဘတှရေဲ့စှနျ့ပယျခွငျးကို ခုထိ ခံနရေတုနျးပါပဲ ဝသနျ နငျငါ့ကိုညာခဲ့တယျ လုံးဝဖှငျ့မပွောခဲ့ဘူး ငါဝမျးနညျးလိုကျတာ ဝသနျ နငျ ငါ့အပျေါ သိပျကိုရကျစကျလှနျးတယျ ဝသနျ ရကျစကျတာ မဟုတျဘူး မောငျ မပွောခငျြလို့ မြိုသိပျထားတာမဟုတျဘူး မောငျ မောငျမုနျးသှားမှာ မောငျဝသနျကိုထားသှားမှာကွောကျလို့ပါ မောငျကိုသိပျခဈြလို့ဖှငျ့မပွောပွရကျခဲ့တာပါ မကျြရညျလေးကရြငျး ပွောပွနတေဲ့ ဝသနျစကားလေးမြား ကွားတဈခကျြ မကွားတဈခကျြ နဲ့ အရကျကိုသာငှဲ့လို့ကနြျော သောကျလိုကျပါတော့တယျ ကမြ ဆယျတနျးအောငျပွီး ပညရေးကောလိပျကြောငျးတတျတယျ။ အဲဒီမှာ မြိုးမငျးလတျ ဆိုတဲ့ သူနဲ့ဆုံခဲ့တယျ မောငျ သူလညျးဝသနျတို့လိုပဲ ပညာရေးကောလိပျကြောငျးလာတတျတဲ့သူပါပဲ ခငျမငျရငျးနှီးကွရငျး သူငယျခငျြးအဆငျ့ကြျောလို့ သမီးရညျးစားတှဖွေဈကွတယျ။
နောကျတော့ ကြောငျးပိတျရကျတဈနေ့ သူနဲ့ကမြ စိတျရဲ့အလိုကို လိုကျမိရငျး လှနျကြူးမိကွပါတယျ မြိုး ဝသနျကို တကယျခဈြတာနျော သခြောလို့လား သခြောပါတယျ ဝသနျရယျ ဝသနျကိုပဈမသှားရဘူးနျော မြိုး စောကျဖုတျထဲ ရောကျနပွေီဖွဈတဲ့မြိုးရဲ့လီးက ဒုတျကနဲ့ဆောငျ့ထညျ့လိုကျသောကွောငျ့ ကမြလညျး အားးးးးလို့အျောမိရငျး မြိုးရဲ့လညျးပငျးကိုအတငျးဖကျလို့ထားမိသှားပါတော့တယျရှငျ။ တဖတျ ဖတျ လိုးနတေဲ့ မြိုးကလညျး ကမြနို့ကိုငုံစုပျရငျး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးနသေောကွောငျ့ အားးးး ကောငှးးးးတယှ မှိုးးးးးးအားးးးးအငှးးးးဟငှးးးး ဝငျနသေောလီးက စောကျဖုတျထဲ တငျးကပျြစှာ ဝငျလာပွီး အတှငျးသားနံရံလေးကိုပှတျဆှဲသှားလိုကျတိုငျး ကမြ လောကကွီးနဲ့အဆကျပွတျသှားမတတျကောငျးလိုကျတာရှငျ အားးးးးးလားးးးးသပေါပှီ အီးးးးးအအအရှီးးးးးဟူးးးး လိုး လိုးကှာ မြိုးရေ အားးးလားးးး အမရေေ ကောငျးတယျ ဆောငျ့ ဆောငျ့ ဖတျ ဖတျ ဖနျးးးဖနျးးးးးး အျောညီး ဆောငျသံလေးမြားက ကွညျနူးစရာလေးပါပဲရှငျ။
အား…. ဝသနျရေ ကောငျးလိုကျတဲ့စောကျဖုတျကှာ ကောငျးရငျ လိုးကှာ မြိုး ဆောငျ့ ဆောငျ့လိုးကှာ အားးးးးးအငျ့ အငျ့ အငျ့ဟာ အားးးးးမြိုး သပေါပွီ ကောငျးတာ အားးးးးအငျးးးးး ကမြ တကယျကို လောကကွီးနဲ့အဆကျအသှယျတှပွေတျလောကျအောငျကို ကောငျးလိုကျတာရှငျ မြိုး တဈခကျြခကျြ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးလိုကျတိုငျး အသကျရှုပါရပျတနျ့သှားသလို့ ကောငျးလိုကျတာရှငျ အားးးးးးး မြိုးရေ ဝသနျ ပွီးးးးးပွီးးးတော့မယျ အိုးးအားးး အငျ့ အငျ့ဟာ ဖနျးဖနျးးးဘုနျးးဖတျ ဖနျးးးးးးးး ဆောငျ့ခကျြကွမျးကွမျးတှအေောကျ စောကျဖုတျကအောငျ့နလေောကျအောငျ့ လူးလိမျ့ အလိုးခံနရေငျးးး အားးးးဝသနှ ဝသနရှေ အားးးးးးးအားးးးးးးး အားးးးးးးမှိုးရေ အားးအားးးးးး လီးနဲ့စောကျဖုတျ ပွားနအေောငျဖိကပျထားရငျး မြိုး လရေ တှေ ကမြစောကျဖုတျထဲ တသောသောပနျးထညျ့လိုကျပွီး နှဈဦးသားကနြေပျစှာဖတျထားရငျး အခဈြတှပွေညျ့နှကျလို့နပေါတော့တယျ အစရှိနောငျနောငျ ဆိုသလို။
ကမြနဲ့မြိုး ကြောငျးပိတျရကျမဟုတျလညျးအတနျးလဈလို့ တခါတလေ အခဈြနယျမွတေပျကာတပျကာ ခြဲ့လို့နပေါတော့တယျရှငျ မြိုး ကြောငျးတှပေိတျတော့မယျနျော ဟုတျတယျနျော ဝသနျ ဝသနျ မြိုးနဲ့ခှဲမနခေငျြတော့ဘူးကှာ တူတူပါပဲ ဝသနျရယျ ကြောငျး ပိတျပွီး ကြောငျးပွနျဖှငျ့ရငျ ဝသနျနဲ့မြိုး ခိုးပွေးကွမယျနျော အခုတော့ ခဏလေး အိမျပွနျလိုကျအုံးမယျနျော ဝသနျ ဝသနျ ကို သနားပါအုံးနျော ဝသနျ ကိုပဈမသှားပါနဲ့နျော ပဈမသှားပါဘူး ဝသနျရယျ ဝသနျကို ဘယျလောကျခဈြသလညျးဆိုတာ သိရဲ့သားနဲ့ ထှကျသှားတဲ့ မြိုး ရဲ့နောကျကြောလေးကိုကွညျ့ရငျး ကမြလညျး မိဘမြားရှိရာမွို့လေးသို့ကားစီးလို့ပွနျသှားပါတော့တယျရှငျ။ ကြောငျးပိတျရကျတှမှော ရာသီလညျးမလာတာရကျတှကြေျောလို့ တိတျတိတျလေး ဆီးစဈကွညျ့လိုကျတော့ ဆီးစဈတံလေးကိုကွညျ့ရငျး ကမြ ငိုငျနပေါပွီရှငျ ရငျတမမနဲ့စောငျ့စားရငျး ကြောငျးဖှငျ့ရကျ ကြောငျးတျောကွီးရဲ့လမျးမနဲ့ဆိုငျတနျးတှမှေ။
ာ မြိုးကို အပွေးအလှားရှာနမေိပါတော့တယျရှငျ စာသငျခြိနျလညျး စိတျကမပါ ညနစေောငျးကြောငျးထဲ မြိုး ကို သာလိုကျရှာမိနပေါတော့တယျ ရငျတှပေူပွီး အအေးဆိုငျထဲ အအေးသောကျရငျးထိုငျနစေဉျ ဝသနျ အျော သူငယျခငျြး နှငျးနှငျး အအေးသောကျမလား ငါတိုကျမယျ မှာလေ မမှာတော့ဘူး ဝသနျ ငါနငျ့ကိုပွောစရာရှိလို့ ဝငျလာတာ နငျ့ကိုတှခေ့ငျြနတော ပွောခငျြနတောကွာပွီ ပွောလေ နှငျးနှငျး အားတော့နာတယျ ဒါပမေဲ့ ပွောမှဖွဈမယျထငျလို့ငါပွောတာနျော ဝသနျ အေးပါဟာ ပွောပါ မြိုးမငျးလတျ အိမျတောငျကသြှားပွီး ဝသနျ ဘာ ခေါငျးတှခြောခြာလညျကမြမူးမိုကျသှားပါတော့တယျရှငျ သခြောလို့လားဟာ နှငျးနှငျး ငါနဲ့ မြိုးမငျးလတျ တို့က တမွို့ထဲပါ သူ့မင်ျဂလာဆောငျ ငါကိုယျတိုငျသှားခဲ့တာပါ ဝသနျ နငျသိအောငျ ငါလာပွောပွတာ နငျသူ့ကို စောငျ့နမှောစိုးလို့ မြိုးမငျးလတျ ကြောငျးလညျးမတတျတော့ဘူး။
စီးပှားရေး ပဲလုပျတော့မယျလို့ကွားတယျ ဝသနျ ငါသှားတော့မယျ ထှကျသှားသော နှငျးနှငျးကို ကွညျ့ပွီး ကမြ မကျြရညျတှတေသှငျသှငျစီးကလြာပွီး ရကျစကျလိုကျတာ သိပျရကျစကျလိုကျတာ မြိုးရယျ ငါ့ဘဝကို လုပျရကျလိုကျတာဟာ ကမြ မိဘ သိက်ခာ ကမြရှရေ့ေး အရှကျသိက်ခာကို ဘယျသူမှမသိအောငျ ဒီကိုယျဝနျကို တောကျ…. တျောသေးတာက ဒီမွို့လေးက ကမြ မွို့မဟုတျတာ သိပျကိုကံကောငျးသှားခဲ့ပါတယျရှငျ မတတျသာတဲ့အဆုံး ရကျစကျသူ လူမဆနျတဲ့သူ လူတဈဦးကွောငျ့ ကမြ လှယျထားတဲ့ ကိုယျဝနျကို တိတျတိတျလေး အရပျလကျသညျတဈဦးနဲ့ဖကျြခလြိုကျပါတော့တယျရှငျ ငိုရငျးပွောပွနသေော ကမြ ကို တခကျြလေး မောငျလှညျ့ကွညျ့ပွီး ဝသနျ နငျပွောခငျြတာ ဒါပဲလား ငါ့အနားက သှားစမျးပါ အရကျသောကျရတာဇိမျပကျြတယျ သှား မောငျ သှားဆိုသှားပါမယျ ဝသနျအမှားတှခှေငျ့လှတျပေးပါနျောလို့အယူခံဝငျရငျး …… ပွီးပါပွီ။
စာကိုသေချာမလုပ်ဘူး စာကိုစိတ်မဝင်စားဘူး မနေ့ကတည်းက သေချာသင်ပေးတာ အာရုံကဘယ်ကိုရောက်နေတာလည်း ပြောစမ်း ဆိုပြီး ခေါင်းကိုဒေါက်ခနဲ ခေါက်ခံထိရင်း အောင်မြင့်မြတ် တစ်ယောက်ခေါင်းလေးပွတ်ရင်း အားးး သေပါပြီဗျာ နာလိုက်တာ ဝသန် ကလည်း မတရားပဲ ခေါက်ပစ်တာ သူ့အသားမဟုတ်တိုင်း မညှာဘူး ဘာ ဝသန် ငါ နင့်ထက် အသက် ၁၃နှစ်လောက်ကြီးတယ် နားလည်လား ပြီးတော့ ငါ့ အလယ်တန်းပြကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်ဆိုတာ သိထားအုံး အောင်မြင့်မြတ် နင့် က အခုမှ 9တန်းကျောင်းသားနော် ရိုရိုသေသေဆက်ဆံ မကြိုက်ဘူး ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အကူအညီတောင်းလို့ နင့်ကို စာလာသင်ပေးတာ သဘောပေါက်နော် ငါကျူ ရှင်သင်တဲ့ ဆရာမ မဟုတ်ဘူး သဘောပေါက်ထား ကြားလား ပိုက်ဆံရဖို့ ငါကျူ ရှင် မသင်ဘူး မေမေကသင်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ငါစာလာသင်နေတာနော် နားလည်ထား ကျမ ဝသန် ဟောက်လိုက်တော့။
မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကျမကိုကြည့်နေတဲ့ အောင်မြင့်မြတ် ပါးစပ်ဖျားက ထွက်ကျလာတဲ့ စကားများကို သင်ခန်းစာ စာအုပ်လေးကိုင်ရင်း မတ်တပ်ရပ်ပြီး အသက်ရှုဖို့ပါ မေ့သွားပါတယ်ရှင် စာတွေ လုပ်ပါတယ် စာတွေလည်းအရင်ကထက်ပိုကျက်ပါတယ် ဝသန် ကျောင်းစာအုပ်ထုက်လိုက်တိုင်း စာအုပ်တွေမှာ ဝသန် ပုံတွေပဲ ပေါ်နေတယ် စာရွက်တွေလှန့်လိုက်တိုင်း ဝသန် အပြုံးတွေပဲ မြင်နေရတယ် စာတွေကျက်မရလို့ အိပ်ယာမှာအိပ်ချ လိုက်တော့လည်း မျက်နှာကျက်မှာပြုံးပြုံးလေး ကြည့်နေတဲ့ ဝသန် ကြောင့် အိပ်မရပြန်ဘူး အာရုံအမြင် တစ်ခုလုံး ဝသန်ပဲဖြစ်နေတာ ဆရာမ သိရဲ့လား နေ့ဘက်ကျောင်းထက်ရတာ မပျော်ဘူး ကျောင်းဆင်းချိန် ဝသန် ကျူ ရှင်လာချိန်လေးကို မျှော်နေမိတာ စိတ်တွေပင်ပန်းလွန်းနေတာ ဆရာမသိရဲ့လား ဝသန် စာသင်နေလည်း ဝသန် လှုပ်ရှားမှုဟန်ပန်လေး ခိုးကြည့်နေရတာ အမောပါ ဝသန် နဲ့စာသင်ရတဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်လေးက။
တကယ့်ကို ပျှော်ရွင်ရင်ခုန်ရတဲ့ကာလလေးတစ်ခုပါ အသက်ဘယ်လောက်ပဲကွာကွာ မျက်စိထဲ ရွယ်တူလေးလိုပဲ ခံစားရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဝသန် လို့ပဲ ခေါ်မိတာပါ နေ့နေ့ညည မေ့လို့မရတာ စိတ်ထဲအချိန်ပြည့်နေရာယူနေတာ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဝသန် သိရင်ဖြေပေးပါလား ဝသန် ရယ် ဘုရား ဘုရား ကျမ ဘာဆိုဘာမှမပြောမိပဲ အံ့သြမှင်သက်စွာ အောင်မြင့်မြတ်ကို စိုက်ကြည့်မိရင်း ထပ်မံ၍ ထွက်ပေါ်လာသော စကားသံကို ကျမဝသန် ထပ်ပြီးနားတောင်မိပါတော့တယ်ရှင် ဝသန် ဖြေစရာမရှိဘူး မဟုတ်လား ဖြေစရာလားရှင် အသက်သာငယ်တယ် ပြောချက်ကလက်လန့်နေပါပြီရှင် စိတ်ထဲပြောမိရင်း ဖြေစရာမရှိလည်း ထပ်မေးပါ့မယ် ဝသန် ဖြေနိုင်ရင်ဖြေပေါ့ မသိရင် ပြောပုံက ကျမ က သူ့တပည့်မလေးကျနေတာပဲရှင် စိတ်ထဲပြောရင်း ရှင်စောပု မိဖုရားကြီးက ဘာဖြစ်လို့ ယောက်ျ င်္ားမယူတာလည်း သိလား ဝသန် ဘုရား ဘုရား ကျောင်းသားအရွယ် ပြောတဲ့စကားလား။
ကျမ မျက်လုံးပါပြူးသွားပြီး သိချင်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားလို့ ငါ မသိဘူး အောင်မြင့်မြတ် ပြောကြည့်လေ ကျမ ဆရာမသာဖြစ်လာတယ် ရှင်စောပု ဘာကြောင့် ယောက်ျ င်္ားမရတာလည်း တကယ်မသိခဲ့ပါဘူးရှင် ကျမ တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစွာ မေးလိုက်မိပါတော့တယ်ရှင်။ ရှင်စောပု ယောက်ျ င်္ား မရတာ မိဖုရားကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ထူးကို ဆန္ဒနဲ့သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းနေလို့ ယောက်ျ င်္ားမရခဲ့တာပါ ဘယ်လောက်သနားစရာကောင်းတဲ့ ရှင်စောပု မိဖုရားကြီးလည်း သီးချိန်တန်သီး ပွင့်ချိန်တန်မပွင့် ခဲ့ရတဲ့ သူ့ခမျှာ သိပ်သနားစရာဘယ်လောက်ကောင်းမလည်း ဝသန် တံခွန်မရှိတဲ့ဘုရား လင်မရှိတဲ့ မိန်းမ မတင့်တယ်ဘူး ဆိုတာ ကြားဖူးမှာပါနော် ဝသန် ကျမလည်း ယောင်ပြီး ခေါင်းငြိမ့်မိရင်း ထပ်ပြောနေသော စကားသံကို ဆက်၍သာနားတောင်မိပါတော့တယ် ဝသန်လည်း ဆရာမဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုမေ့ထားပါ အသက်အရွယ်တွေကိုလည်း ခဏမေ့ထားပါ ကျောင်းသားနဲ့ဆရာမ ဘောင်တွေကိုမေ့ပျောက်ထားပါ။
ရှင်စောပု လို ဘဝခရီးလမ်းမှာ အထီးမကျန်စေဖို့ တင့်တယ်သော မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ ကျနော် အချစ်ကို လက်ခံပေးပါ ကျနော် ဝသန် ကို သိပ်ချစ်တယ်။ ဘာ! ကျမ ကို ချာတိတ် တစ်ယောက်က လှည့်ပတ်ရည်းစားစကား ပြောတာကို အငိုက်မိခံလိုက်ရလို့ ရှက်စိတ်ကမွန်ထူသွားပြီး လက်ထဲစာအုပ်ကြမ်းပြင်ထက်ပြုတ်ကျသွားပြီး ဒေါသနဲ့ခြေလှမ်းသွားလိုက်ပြီး လက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီး ပါးကို ရိုက်ဖို့ ရွယ်လိုက်စဉ် စာသင်ခုံကနေ ထိုင်ရာကလုံးဝမထပဲ အောင်မြင့်မြတ် မျက်နှာလေးမော့ပေးထားရင်း မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားရင်း ရိုက်ပါ ရိုက်ပါ ဝသန် ဝသန် ရိုက်လို့ နာကျင်ရလည်း မျက်နှာအရေပြားမှာ ခဏပါ ရိုက်ပါ ရိုက်လိုက်စမ်းပါ ရိုက်လေ ရိုက် ပါးကိုရိုက်ချလိုက်စမ်းပါ ဝသန်ဆိုပြီး ထိုင်ရာက ကျနော် မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဒီမှာ ဝသန် ဆိုပြီး ကျနော် နဲ့ ဝသန် အကြည့်မျက်လုံးခြင်းဆုံပြီး ဝသန် မင်းကြောင့် ကျနော် အသဲနှလုံးအတွင်းတောင့်တစ်နေရာထိ မင်းအကြည့်တွေစူးစိုက်နေတာကြာနေပြီ ဆိုတာသိရဲ့လား။
ပါးရိုက်မှ နာကျင်ရမယ်ဆိုလည်း ခံလိုက်မယ် ဝသန် ကျနော် အသဲနှလုံးထဲ ချစ်မိလို့ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်မှိတ်နေရတာက ပါးရိုက်ခံထိတာထက် ပိုလို့နာကျင်နေပါပြီ ဝသန် ရိုက်လေ ရိုက်ပါ အားမနာပါနဲ့ ရိုက်လိုက်ပါ တသက်စာ အမှတ်တရအဖြစ် ယုယုယယသိမ်းထားချင်လို့ပါ ဝသန် ရိုက် ရိုက် ရိုက် သေအောင်ရိုက်လိုက်စမ်း ဝသန် အော်ဟစ်ပြောဆိုနေသော ချာတိတ်မျက်ဝန်းမှာ ရီဝေနေရင်း ကျသွားတဲ့မျက်ရည်တစ်ပေါက်ကိုမြင်လိုက်ပြီး ကျမ ရင်ထဲ တစ်ခုခုကို ဆွဲနှုတ်လို့ ချာတိတ် ယူသွားပါပြီရှင်။ မြှောက်ထားတဲ့လက်ကိုရုတ်လို့ အခန်းထဲကထွက်ဖို့ခြေလှမ်းပြင်လိုက်စဉ်မှာ ဝသန် အဖြေတစ်ခုခု ပေးခဲ့ပါ ကျန်နေသူကို အသိအမှတ်ပြု သေးရင် တစ်ခုခုပြောခဲ့ပါ ကျနော်ကို ကျောပေးနေတဲ့ ဝသန် ဆီက စကားလေးကို ကြားလိုက်ရပါတော့တယ်ဗျာ ဝသန် ကို တကယ်ချစ်တာသေချာလား အရင်စဉ်းစားပါ ပြီးရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ဆရာမနဲ့တပည့် စကားဝေဖန်ကဲ့ရဲ့တာခံနိုင်လား ထပ်စဉ်းစားပါ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် တသက်လုံး ချစ်နိုင်ရဲ့လား စဉ်းစားပါ ဝသန် ရင်ထဲက အချစ်ထက် အောင်မြင့်မြတ်ရင်ထဲကအချစ်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါ မနက်ဖြန် ဝသန် စာလာသင်ပါ့မယ် အဖြေတစ်ခု စဉ်းစားလို့ မရတော့ရင် မနက်ဖြန် နောက်ဆုံးစာလာသင်ပေးတဲ့နေ့ဖြစ်သွားပြီ ဆိုပြီး အခန်းထဲက ထွက်သွားတဲ့ ဝသန်နောက်ကို ပြေးလိုက်ရင်း အော်ခေါ်ပေမဲ့ ဝသန် ကျနော်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲ ဆိုင်ကယ်လေးအိမ်ထဲကမောင်းထွက်သွားပါတော့တယ်ဗျာ။ နောက်နေ့ကျောင်းသွားစာသင်လည်းစိတ်ကမပါ တနေကုန်လို့ညနေစောင်းတော့ ဆရာမလေး ဝသန် စာသင်ချိန်ကို ကျနော် ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်စောင့်နေမိပါတယ်ဗျာ ၁၅မိနစ်ခန့်အကြာတွင် ခြံထဲဝင်လာသော ဆိုင်ကယ်သံကြောင့် ကျနော်ထိုင်ရာကထလို့ အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်ကိုပြေးလို့ ဝသန်မျက်နှာလေးကို ထွက်ကြည့်မိပါတော့တယ် ရိုးရှင်းတဲ့သနပ်ခါးလေးနဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့ယဉ်တဲ့ ဝသန် ရဲ့အပြုံးတစ်ချက်က ကမ္ဘာကျော်ပြုံးအလှပိုင်ရှင် မိုနာလီဇာ နဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်။
ကျနော် မျက်စိထဲ မိုနာလီဇာအပြုံး က အလိုလို ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယအလှဆုံးဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဗျာ အနားကအိမ်ထဲဝင်သွားသော ဝသန်ကိုသတိမတားမိလိုက်ပဲ အိမ်တံခါးဘောင်ကိုမှီရင်း ခြံထဲကိုသာသွင်သွင်ကြီးကြောင်ငေးကြည့်နေမိပါတော့တယ်ဗျာ။ နောက်ကျောကို လက်နဲ့ပုတ်ခံထိမှ ငေးငိုင်နေတဲ့ကျနော် လန့်သွားပြီး နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ချာတိတ် ဘာတွေငေးနေတာလည်း ဝသန် စကားကြောင့် ကျနော် မတ်တပ်ကြီးအသက်ရှုပါမေ့သွားလောက်အောင် ဝသန် မျက်နှာလေးကို စိုက်ကြည့်ရင်း ပထမဆုံး ချာတိတ် လို့ ဆရာမ ပါးစပ်ဖျားက အသုံးအနှုန်းလေး ရင်ခုန်လိုက်တာဗျာ ဟာ ဘာကြောင်ကြည့်နေတာလည်း ဝသန် သိပ်လှတယ် သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် မညာပါဘူးတကယ် အသက်ရှုဖို့မေ့လောက်အောင် ဝသန် သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းနေတယ် ဟာ ဘာတွေပြောနေတာလည်း ဦးနဲ့အန်တီ ကြားသွားအုံးမယ် ပြသနာပါပဲ ဖေဖေနဲ့မေမေ အပြင်သွားတယ် အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူး ဝသန်။
ဝသန် အဖြေပေးပါတော့နော် ရူးတော့မယ် ကြာရင် ဝသန်ကြောင့် စားမဝင် အိပ်မရနဲ့အသက်ပါသေတော့မယ် သနားပါ ဝသန်ရယ် ကျမ ချာတိတ် မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီး ချာတိတ် ဝသန် ပြောတာသေချာနားတောင်နော် ချာတိတ် ဝသန် နဲ့ ပတ်သတ်ရင် ပြသနာအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်စကားတွေထက် ဝသန်ဘက်ကအမြဲရပ်တည်ပေးနိုင်လား ဝသန် ကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မပြောင်းလဲပဲ ချစ်နိုင်ပါ့မလား ကျမ ရဲ့စကားသံလေး ပြီးဆုံးချိန်ရောက်မှ ဝသန် ရဲ့ အချစ်သာရမယ်ဆိုရင် အရာအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ရဲပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝသန်သာဘေးနားရှိရင် ထာဝရအဆုံးထိ ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းချင်ပါတယ် ဖြစ်လာသမျှ အဆိုးအကောင်း ဝသန်ဘက်ကအမြဲရပ်တည်နေပါ့မယ် အေးစက်သောမျက်လုံးများနဲ့ နှလုံးသားထဲကလျှံကျလာတဲ့စကားလုံးများကို ကျမနားတောင်မိရင်း ခေါင်းငုံနေသော ချာတိတ် ရဲ့လက်ကို အလိုလို ကျမ ဆုပ်ကိုင်မိလိုက်တော့ အံ့သြခြင်းတွေအပြည့်နဲ့။
စိုက်ကြည့်နေသော ချာတိတ်ရဲ့နဖူးလေးကို ကျမခြေဖျားလေးတောက်လို့ နမ်းလိုက်မိပါတော့တယ်ရှင် မသိစိတ်ရော အသိစိတ်ဆိုတာတွေရော ဆရာမ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေရော ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပျောက်သွားမှန်း မသိတော့ပဲ ကျမ အသဲနှလုံးက စေခိုင်းရာတွန်းအားတစ်ခုကြောင့် ချာတိတ် နဖူးကိုနမ်းမိရင်း မောင် ကို သိပ်ချစ်တယ် ပြောမိရင်း မောင့် ရင်ခွင်ထဲခိုဝင်ရင်း မောင့်ခါးလေးကို ကျမ တင်းကျပ်စွာဖက်ထားမိပါတော့တယ်။ အမှတ်မထင် တစ်မိနစ်တောင် မကြာလိုက်တဲ့ အယုအယအနမ်းနဲ့ ဝသန်ရဲ့ချစ်စကားလေးကို အိပ်မက် မက်နေသူတစ်ယောက်လို့ မတ်တပ်ရပ်ရင်း ရင်ခွင်ထဲရှိနေသော ဝသန်ကို ပြန်လည်ဖက်ထားမိရင်း ဝသန် ကို မောင်လည်း သိပ်ချစ်ပါတယ် လို့ပြောရင်း ဝသန် ဆံနွယ်လေးကို နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ မောင် ဗျာ လွတ်ပါတော့ကွာ အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ ဝသန် ရှက်တယ် ကျနော် ဝသန် ကို ဖက်ထားသော လက်ကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
မောင် စာသင်ရမယ် လာ ဆိုပြီး စာသင်ခန်းရှိရာသို့ မောင့်လက်ကိုဆွဲလို့ ကျမ ခေါ်လာမိပါတော့တယ်ရှင် မောင် ထိုင် စာသင်ရမယ် ဝသန် စကားလေးဆုံးတာနဲ့ ထိုင်ခုံမှာမထိုင်ပဲ ကျနော် ဝသန်ကိုအတင်းဆွဲဖက်ပြီး ရင်ချင်းအပ်ကာ ဝသန်ခါးလေးကိုဖက်လိုက်ပြီး ဝသန် နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ကျနော် မက်မောစွာ နမ်းစုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ချစ်တယ် ဝသန်ရယ် အွင်းးးးးးးးပြွတ် ပြွတ် အင်းးးးး မောင်ရယ် သိပ်ချစ်တယ် အင်းးးးးးပြွတ် ပလပ် ပြွတ် စာသင်ခန်းထဲ စာကိုမသင်ဖြစ်တော့ပဲ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ အနမ်းသင်ခန်းစာ တ ပြွတ် ပြွတ် တ အင်း အင်းးး ညီးထွားသံလေး အနမ်းသင်ခန်းစာထဲ ဆရာမလေးဝသန်နဲ့ ကျောင်းသားလေး အောင်မြင့်မြတ် တို့ လျှာနှစ်ခု တံတားလေးခင်းလို့ တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက် ကူးလူး ပေါင်းစပ်ရင်း အနမ်းဋိကာ ဖွဲ့လို့ စာသင်ခန်းလေးလည်း အခုတော့ အချစ်တွေပြည့်နှက်လို့နေပါတော့တယ်ဗျာ အွင်း…အူး…အု… ပလပ်…… အင်း…အင်း…အသက်ရှုမွန်းကျပ်လောက်တဲ့အထိနမ်းရှိုက်ပြီးမှ အနမ်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီး။
ဝသန်ကို ကျနော် ရင်ခွင်ထဲဖက်ထားမိရင်း ဝသန် ပြောလေ မောင် မောင် ဝသန်ကို ခွဲမနေချင်တော့ဘူး မောင်တို့လက်ထပ်ရအောင် မောင် ဝသန် ကို ခဏလေးတောင်ဝေးမနေချင်တော့ဘူး ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေ မောင်တို့ခိုးပြေးကြရအောင် မဖြစ်နိုင်ဘူး မဖြစ်သင့်ဘူး မောင်ရယ် မောင်က အခုမှ ကိုး တန်း ကျောင်းသားအရွယ် ဝသန် က ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်ပါ စောင့်ထိန်းရမဲ့စည်းတွေ ဘောင်တွေရှိပါတယ်။ မောင် ဆယ် တန်း စာမေးပွဲအောင်ပြီးရင် ဝသန် မောင့်ကိုလက်ထပ်ပါ့မယ်နော် ကတိပေးတယ်နော် မောင် မဖြစ်နိုင်ဘူး ဝသန် မောင့်အနားမရှိရင်မနေတတ်ဘူး မောင် သေသွားမှာနော် ဝသန် မောင် သေတာမြင်ချင်ရင် ဝသန် ဆက်ငြင်းပါ စည်းတွေ ဘောင်တွေ မောင်မသိဘူး မောင်သိတာ တစ်ခုပဲ ဝသန် ကို မောင် သိပ်ချစ်တယ် ဝသန် အနားမှာမရှိရင် မောင်အနာဂတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာပဲ မောင် သေတာမြင်ချင်ရင် ဝသန် ထပ်ငြင်းဆန်ပါ အနားကထွက်သွားလိုက်ပါ။
ဝသန် ကို ခြိမ်းခြောက်တာမဟုတ်ဘူး မောင့် နှလုံးသားက မက်မက်မောမော တောင်းဆိုနေတာပါ လို့ပြောရင်း ဒူးတောက်ကျရင်း ကျမကို မော့ကြည့်နေတဲ့ မောင့်မျက်ဝန်းထဲကမျက်ရည်စတွေကို ကျမ ဝသန် လည်း ဘယ်လိုအင်အားမျိုးနဲ့ ဆက်၍မကြည့်နိုင်တော့ပဲမောင့်အနားဒူးတောက်ထိုင်ချပြီး မောင်ကိုဖက်ထားလိုက်ပြီး မောင် ဝသန် မောင့်အချစ်ကို မငြင်းဆန်ဝံ့ပါဘူး မောင် အချစ်က ဝသန် ဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ မောင် အချစ်နဲ့ ဝသန် အရာအားလုံးကို ရင်ဆိုင်မယ် ဝသန် တကယ်ပြောနေတာလား တကယ်ပေါ့ မောင် ပျှော်လိုက်တာ ဝသန်ရယ် မောင်တို့ ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ဖို့ လူတွေနဲ့ဝေးရာခဏလေး ပြေးကြမယ်နော် ဆရာမ မောင်နော် ဘာ ဆရာမလည်း ရယ်မောသံလေးများတိတ်ဆိတ်သွားတော့ ဝသန်ရော ကျနော် ရော ဘားအံမြို့လေးသို့ ခိုးပြေးသွားကြပါတော့တယ်။ ဘားအံကမ်းနားလမ်းတည်းခိုခန်းတစ်ခုမှာ တည်းခိုလိုက်ပြီး ညနေစောင်းတော့။
တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်ဆွဲလို့ ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း လေညှင်းခံလမ်းလျှောက်ရင်း ရွေယဉ်မျှော်ဘုရားကိုတူတူဖူးမြှော်ကြပြီး သံလွင်မြစ်ရဲ့ညနေခင်းဆည်းဆာကို တူတူလေညှင်းခံရင်း မောင် ပြောလေ ဝသန် မောင်တို့မိဘတွေ ခုချိန်ဆို တော်တော် ပြောလက်စ ကျမ နှုတ်ခမ်းကို မောင်လက်ကလေးမပြောဖို့ထားလိုက်ရင်း ဝသန် အားမငယ်ပါနဲ့နော် မေမေနဲ့ဖေဖေ စိတ်ဆိုးလည်း ခဏပါပဲနော် မောင်တို့အဆင်ပြေသွားမှာပါနော် မောင်တို့ပြန်ရအောင်နော် ဝမ်းနည်းစရာမတွေးပါနဲ့ ဒီနေ့ညလေးဟာ မောင်နဲ့ဝသန်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးအချစ်ညလေးပါနော် မောင်နော် ဘယ်လိုတွေ ပြောနေတာလည်း ရှက်သွေးလေးဖြာနေတဲ့ ဝသန် တစ်ယောက်တကယ့်ကို ဆယ်ကျော်သက်လေးလိုပဲ တကယ်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ပါးပြင်လေးကိုကျနော် ဖက်နမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ အိုးးးးးး မောင်နော် ပြန်ရအောင်နော် ဝသန် မောင့်သဘောပဲနော် ဘုရားပေါ်ကဆင်းလို့ ကမ်နားလမ်းကနေတစ်ဦးကိုတစ်ဦးခပ်တင်းတင်းလေးဖက်ထားရင်း။
လမ်းလျှောက်လို့ တည်းခိုခန်းကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ် တည်းခိုခန်း အခန်းတံခါးကိုပိတ်လိုက်ပြီး အခန်းတံခါးဘက်ကို ဝသန် ကို ဆွဲကပ်လိုက်ပြီး ကျနော် ဝသန်နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းစုပ်လိုက်ပါတော့တယ် အွန်းးးးးအူးးးးးး ပြွတ် ပလပ် ပြွတ် အင်းးးး ကျနော် လျှာလေးကို ဝသန် လျှာလေးနဲ့ ထိတို့နှုတ်ခမ်းလေးကို မွတ်သိပ်စွာစုပ်နမ်းရင်း ကျနော် ညာဘက်လက်နဲ့ ဝသန်ရဲ့ညာဘက်နို့အုံလေးကိုအကျီ င်္ပေါ်ကအုပ်ကိုင် ညစ်ကစားရင်း နှုတ်ခမ်းခြင်း စုပ်နမ်းနေပါတော့တယ် အွင်းးးးး အင်းးးးးးအွင်းးးးးးးးပြွတ် အွင်းးးးးးအ နို့ကို ကိုင်စုပ်ညစ်ကစားနေတဲ့ကျနော် လက်က ပေါင်ကြားက ဝသန် စောက်ဖုတ်ကို ထမိန်ပေါ်ကအုပ်ကိုင်ရင်းဖွဖွလေးပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ အားးးး မောင် ရယ် ဝသန် နေရခက်လိုက်တာ အသက်ရှုမဝတော့ဘူးကွာ ဝသန် စကား နားထဲမကြားတော့ဘူးဗျာ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သပ်ပေးရင်း ထမိန်ကို ကျနော် ချွတ်ချလိုက်ပါတော့တယ် အိုး မောင် ဆိုပြီး ဝသန်ထမိန်လေးကိုလှမ်းဆွဲပေမယ့်။
မမှီလိုက်ပဲ ကြမ်းခင်းမှာ အပုံလိုက်လေထမိန်လေးဖရိုဖရဲကျဆင်းသွားပါတော့တယ်။ အားးးးး မောင်ရယ် ရှက်လိုက်တာကွာဆိုပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီကို လက်နဲ့ဖုံးအုပ်ရှက်နေတဲ့ ဝသန်ကို ကျနော့် စွေ့ခနဲပွေ့ချီလိုက်တော့ အိုးးးးးးမောင် အငိုက်မိသွားတဲ့ဝသန်ကို ပွေ့ချီထားရင်း ကုတင်ပေါ် နှစ်ယောက် ဘေးတစောင်းပစ်ချရင်း ကုတင်ပေါ်တူတူပြိုဆင်းသွားကြပါတယ်ဗျာ အိုး အေမ့ မောင် မောင်နော် လူကိုလန့်သွားတာပဲကွာ သိပ်ဆိုးတာပဲ ဘာမှန်းလည်းမသိဘူးကွာ ဟွန်း ထိုးနေတဲ့မျက်စောင်းလေးက နှလုံးသားတည့်တည့်ကိုထိသွားလို့ ရင်ခုန်နှုန်းလည်းထိန်းမရတော့လို့ ဝသန်နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြန်နမ်း မိရင်း လက်ကလည်း ဝသန် အကျီ င်္လေးကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး အနမ်းလေးကိုရပ်လိုက်ပြီး ဝသန် ဗိုက်ပေါ်ကျနော် ဖွဖွလေးဖိထိုင်တားရင်း ဘော်လီချိပ်လေးဖြုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ပွင့်ထွက်လာသော ဝသန် နို့သီးခေါင်း နီညိုရောင်သန်းနေတာလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။
အသည်းတွေယားလာလို့ နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညိုးနဲ့လက်မဖိညစ်ကစားရင်း လက်တစ်ဆုပ်စာ ဝသန်နိုအုံလေးကို ဆုပ်နှယ်ညစ်ကစားလိုက်တော့ အားးးးး မောင်ရယ် ဝသန် ရင်တွေအရမ်းခုန်တယ်ကွာ ဝသန် ကို အသေသတ်နေတာလား ကွာ နေလို့မတတ်တော့ဘူးးးးး အားးးးးးးးမောင်ရယ် မျက်လုံးလေးမှေးစင်းလို့ ကုတင်အိပ်ယာအခင်းကိုလက်နဲဆုပ်ကိုင်ရင်း အသံလေးတိုးညှင်းစွာအော်ညီးနေတဲ့ ဝသန်မျက်နှာလေးကို ကြည့်လိုက်ပြီး အရမ်းချစ်တယ် ဝသန်လိုပြောရင်း ကျနော် ဝသန်အပေါ်မှောက်ချလိုက်ပြီး နီညိုရောင်လေး သန်းနေသော နို့သီးခေါင်းလေးကို လျှာလေးနဲ့တို့ထိကစားရင်း ကျန်နို့သီးခေါင်းလေးကိုလည်းလက်နဲ့ချေကစားရင်း ရင်သားကိုအုပ်ကိုင်ညစ်ကစားရင်း နှုတ်ခမ်းလေးအသာအယာငုံလိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကိုအာငွေ့လေးပေးရင်း တပြွတ်ပြွတ် ကျနော် စုပ်နေမိပါတော့တယ် ဝသန်ကတော့ ကျနော် ဆံပင်လေးကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း အိုးးးးးးအားးးးးးးးကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ်။
အားးးးအင်းးးးးဟူးးးးးးသိပ်ကောင်းတယ် မောင် အ အမေ့ အိုးးးးးမောင် မောင်ရေ အိုးးးးးး ဝသန် နို့လေးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုပ်နမ်းရင်း ကျနော်လည်း အကျီ င်္ကိုချွတ်လိုက်ပြီး အနမ်းကိုရပ်လိုက်ပြီး ဝသန် ကို မောင် အရမ်းချစ်တယ် သိလား သိပါတယ် မောင်ရယ် မောင်ချစ်တာထက် ဝသန် ချစ်တာကပိုပါတယ် သိလား မောင်ကို ဝသန် စာတွေ သင်ပေးခဲ့တယ်နော်။ အခုတော့ မောင် ပြန်သင်ပေးမယ် အချစ်သင်ခန်းစာလေးတွေ ဝသန်သင်ယူချင်ပြီ မောင် သင်ရိုးညွန်းတမ်းမရှိတဲ့ မောင့်အချစ်သင်ခန်းစာလေးတွေ နေ့တိုင်းသင်ယူချင်နေပါပြီ မောင်ရယ် သိပ်ချစ်တယ် မောင် အရမ်းချစ်တယ် မောင် မာနတွေ သိက္ခာတွေပါမကျန်တော့အောင် မောင့်ကိုချစ်မိခဲ့ရသူတစ်ယောက်ပါ မောင်ယုံပါတယ် သိပါတယ် နားလည်ပါတယ် ဝသန်ရယ် လိုဆိုပြီး ဝသန် အောက်ခံဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ဒူးလေးတောင်လိုက်ပေးလိုက်ချိန် စောက်ဖုတ် မွေးခပ်ပါးပါးလေးနဲ့အဖုတ်ကို လက်နဲ့အုပ်ကာထားတဲ့။
ဝသန်လက်လေးကိုဘေးသို့ဆွဲဖယ်လိုက်ပြီး မရှက်ပါနဲ့တော့ ဝသန် ဆိုပြီး ကာထားတဲ့လက်ကိုဘေးသို့ဆွဲဖယ်ချလိုက်ပြီး ကျနော်လည်း ဝသန်စောက်ဖုက်အနားမျက်နှာလေးအပ်လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်နူတ်ခမ်းသားကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲဟပြဲလိုက်ရင်း စောက်ဖုတ် အတွင်းနံရံသားရဲရဲလေးကို လျှာလေးနဲ့ တပြက်ပြက် လျှက်လိုက်ပြီး လျှာထိပ်လေးနဲ့ ဝသန်စောက်စိကို ကလော်ထိုး လျှက်စုပ်ပြီး ပါးစပ်လေးနဲ့ ငုံထားရင်း စောက်စိကို မက်မက်မောမော တပြွပ်ပြွပ် နဲ့ စုပ်နမ်းနေပါတော့တယ်။ အားးးးးးအမေ့ရေ အားးးးလားးးးးးး မောငွ အူးးးးးးတော်ပါတော့ တော်ပါတော့ကွာ ရှီးးးးးသေပါပြီ အမေ့ အိုးးးးးလုပ်တတ်လိုက်တာကွာ မောင်ရေ စုပ်စုပ် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဖိစုပ်ကွာ အားးးးးလားးးးးမောင်ရေ ကောင်းးးးတယ် အိုးးးး ကျနော်လည်း ဘယ်လိုမှမပြောတတ်တဲ့အနံလေးက နှာခေါင်းဝကတိုးဝင်လာတိုင်း လီးကပါတောင်တောင်နေရင်း ဝသန်စောက်စိကိုဖိဖိစုပ်ရင်း လက်ညိုးလေးကို စောက်ဖုတ်ထဲထိုးထည့်ကလိကစားရင်း။
စောက်ဖုတ်ကြီးကို ငုံလို့သာ ကျနော် တပြက်ပြက် နဲ့ စုပ်နမ်းနေမိပါတော့တယ်ဗျာ စောက်ဖုတ်ထဲကစိမ့်ထွက်လာတဲ့စောက်ရည်လေးတွေက ပါးစပ်မှတဆင့်ကျနော်လည်ချောင်းထဲပူနွေးစွာ စီးဝင်သွားပါတယ် အနံ့လေးမပြင်းပေမဲ့ စောက်ရည်ကို အရသာရှိစွာ ကျနော် မျိုချလို့ လီးကလည်းပေါက်ထွက်လုမတတ် အောက်ခံဘောင်းဘီထဲရုန်းကန်နေပါတော့တယ်ဗျာ။ ဖင်လေးကော့ပျံရင်း ခါးလေးပါကြွကြွ စောက်ရည်တွေ ဝသန် ညစ်ညစ်ချရင်း ထွက်လာသမျှစောက်ရည်ကြည်လေးများကို အငမ်းမရ စုပ်လို့ရသလောက်သောက်သုံးရင်း အားးးးး အိုးးးးးမောငွ ပှီးးးးပှီ အ အားးးး အားးးးးမောင်ရေ အားးးးးထွက်ကုန်ပြီ အိုးးးးးမောင် အားးးးးအင့် အင့် အီးးးးးးးးအင့် အားးးးးးမောင် ရေ အိပ်ယာပေါ် ဖင်လေးပစ်ချလိုက်ရင်း ငြိမ့်ကျသွားတော့ စောက်ရည် လက်ကျန်လေးများလျှက်လိုက်ပြီး စောက်စိကို ပြွတ်ခနဲ ဆွဲစုပ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ဝသန် ပေါင်ကြား ဒူတောက်လိုက်ပြီး။
လီးကို စောက်ဖုတ်နဲ့တေ့တားပြီး စောက်စိလေးကိုလက်မလေးနဲ့ကျနော်ဖိချေရင်း ဖြည်းညှင်းစွာ စောက်ဖုတ်ထဲတရစ်ချင်းဖိသွင်းလိုက်တော့ မျက်လုံးလေးမှေးစင်းကျရင်း ဝသန်ရဲ့အော်ညီးသံလေးအခန်းထဲပျံလွင့်လို့ မင်္ဂလာဦးညရဲ့တေးသံလေးတစ်ခုအဖြစ် အားးးး မောင်ရယ် အအ အင်းးးးးးကောင်းလိုက်တာ ဖြေးဖြေးလေးလိုးပါ မောင်ရယ် အားးး သိပ်ကောင်းတယ်ကွာ လိုးပါ မောင်ရယ် ချစ်လိုက်တာမောင်ရယ် အင်းး စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်နေသောလီး က နှုးညံ့သော အတွင်းသားထဲစိမ့်ကျလာသော စောက်ရည်များကြောင့် အဝင်အထွက် လေး တဖြည်းဖြည်းလေး သွက်လာရင်း လီးကြောလေးများ စိမ်တက်လာအောင် ကျနော်လည်း အကောင်းကြီး ကောင်းလာပြီး အိပ်ယာခင်းပေါ်လက်တောက်ကာ ခါးကလည်း ကြွကြွလာပြီး လီးကိုတစ်ဆုံး ဆောင့်ထည့်ရင်း လီးနဲ့စောက်ဖုတ်ရိုက်ချက်အသံများနဲ့အချစ်ရဲ့သာယာသံလေး ပေါက်ထွက်လာပြီး အား…. ဝသန် ရေ ချစ်တယ် အိုး….အ…အား…. လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ။
အ ဟူးးးးအင့် အင့် ဟာ အားးးးဝသန် အိုးးးးမောင် ချစ်တယ် ချစ်တယ် မောင်ရယ် ခပ်တင်းတင်းလေး စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်နေတဲ့မောင့် လီးက တချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျမရင်ထဲနင့်နေအောင် တကယ်ကိုကောင်းလွန်းလှပါတယ်ရှင်။ ကျမ အတွက် ဆရာမ ဆိုတဲ့ အရှက်ကဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပျောက်ကုန်မှန်း မသိအောင် ပါးစပ်ဖျားက လိုးးးးးလိုးးးးးပါ အားးးးးးကောငွးနပှေီ ကှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်လိုးပါကွာ အားးးးအီးးရှီးးးး တကိုယ်လုံး ချွေးတွေးပျံလို့ မောင်ရဲ့လိုးဆောင့်ချက်ကို သေအောင်လိုးစမ်းပါ မောင်ရယ်လို့ အော်ဟစ်တောင်းဆိုမိသည့်အထိ တစာစာအော်ဟစ်တောင်းဆိုမိသည့်အထိ မောင့်လိုးချက်များအောက် စောက်ဖုတ်က အရည်တောင့်တောင့် ကျလာသည့်အထိ ကောင်းနေပါတော့တယ်ရှင်အားးးးးး မောင် ရယ် သေအောင်ဆောင့်လိုးပါ လိုးပါ ဝသန် လာချင်နေပြီ အီးးးးးအု အားးးးရှီးးးမောင်ရေ အိုးးးးးအမေ့ အားးးးကောင်းတယ် အ အားးးး နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိကိုက်ထားရင်း။
ကျောင်းသားလေး မောင့်ရဲ့လိုးချက်များအောက် ဆရာမလေး ကျမ ဝသန် ဒူးတောက်လို့ လက်မြှောက်အရှုံးပေးလိုက်ပါပြီရှင် ဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းကို ကျမ စောက်ဖုတ် တဆစ်ဆစ် ကျိန်းစပ်ပူထူသွားလောက်တဲ့အထိ ကော့ပျံနေလောက်အောင် အလိုးကို ခံရင်း စောက်ရည်တွေလျှံကျလို့အိပ်ယာခင်းတစ်ခုလုံးရွဲနစ်ကုန်ပါတော့တယ်ရှင် ကျမ နို့အုံနှစ်ခုလုံးကို မောင့်လက်နဲ့ စုံကိုင်အတင်းဆွဲညစ်ထားပြီး အားကုန်သုံးလို့ ဆောင့်လိုး နို့ကိုင်ပြီး မတရားဆောင့်ဆွဲလိုးချက်က ကျမအတွက် နာကျင်မှုနဲ့ စောက်ဖုတ်က ကောင်းလွန်းတဲ့ခံစားချက်နဲ့ရောယှက်လို့ မျက်လုံးကို မှိတ်လို့ တဘုန်းဘုန်းနဲ့ ပစ်ဆောင့်နေတဲ့ မောင်လည်း အား ………အမေရေ အား………မောငရွေ အားးးးးးးးးးးအီးးးးးအ အားးးး တဘုန်းဘုန်းနဲ့ပစ်ပစ်ဆောင့်ရင်း ကျနော်လည်း ဝသန်အပေါ်မှောက်ကျရင်း စောက်ဖုတ်ထဲ လရေတွေ တပျစ်ပျစ်နဲ့ အရှိန်နဲ့ပန်းထွက်လို့ နှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်ထားရင်း။
ကာမရေကြောထဲ ထပ်ကာထပ်ကာ မျှောလို့နေပါတော့တယ်ဗျာ။ သာယာသောနေ့ရက်လေးအချို့ဖြတ်သန်းပြီးနော် မောင်ကို မောင်မိဘတွေအမွေဖြတ်စွန့်လွတ်လိုက်တဲ့သတင်း သတင်းစာထဲပါလာပါတော့တယ်ရှင် ကျမ လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်း ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ နောက်ဆုံး ဘားအံမြို့လေးသို့ပြောင်းရွေ့စာတင်ပြီး အခုတော့ ဘားအံမြို့လေးမှာ အိမ်ငှားနေရင်း မောင့်ကိုကျောင်းပြန်ထက်ခိုင်းပြီး ကျမ ကတော့ ဆရာမအဖြစ် ကျောင်းသားတွေကိုစာတွေဆက်သင်နေစဲပါပဲရှင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စကားများကို မောင့်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုလေးနဲ့ အရာရာကိုကျမ ရင်ဆိုင်ရဲနေပါပြီရှင် တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ်ပြောင်းလို့ မောင်လည်း ၁၀တန်းအောင်လို့ သွားပါပြီရှင် အလုပ်လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ် ဆိုလို့ မိန်းမလုပ်စာ စားရတာမျိုမကျဘူး မိန်းမကိုလည်းသနားလှပြီလို့ တဖွဖွပြောနေသော မောင့်ကြောင့် ကျမ မောင်လုပ်ချင်သော အကျဉ်းဦးစီး ငှာနထဲဝင်သွားသော မောင့်ကိုကြည်ဖြူ စွာခွင့်ပြု လိုက်ပါတယ်ရှင်။
နောက်တော့ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာထဲ မောင်နဲ့ကျမ ပြောင်းနေကြရင်း သာယာသောဘဝလေးဖြစ်လို့ အခုချိန်မှာပြောနေကဲ့ရဲ့နေသောလူတွေရဲ့ပါးစပ်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပိတ်လို့သွားပါတော့တယ်ရှင် တာဝန်ချိန် ယူနီဖောင်းနဲ့မောင်က သိပ်ကိုလိုက်ဖက်လွန်းပါတယ်ရှင် မိန်းမ ဘာတွေ စဉ်းစားနေတာလည်း ထမင်းစားလေ မောင့်မိန်းမကတော့ အတွေးတွေများနေပါလား ပြော မိန်းမ ဘာမှမဟုတ်ဘူး မောင်ရယ် ဝသန် စားချင်စိတ်မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ် ဟိုဟာလည်း မလာဘူးဖြစ်နေတယ် ရက်လည်းကျော်နေပြီ မောင် ဟာ ဝသန် မိန်းမ တကယ်ကြီးလား ဟားဟားးငါကွ ဟာ ဖြေးဖြေးအော်ပါမောင်ကလည်း ရှက်လိုက်တာ ပျော်သွားလို့ပါ မိန်းမကလည်း ဟားဟားးးး ရယ်မောနေသော မောင့်မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်း အပျှော်လေးတွေပါ ကျမ ရင်ထဲကူးစက်လာပါတော့တယ်ရှင် ရက်မှလပြောင်း အခုဆို သုံးလလောက်ကြာပြီးနော် အားးးးးအမေရေ မောင်ရေ ထပါအုံး ဝသန် ဗိုက်ထဲကမတရားအောင့်ပြီးမတရားနားနေတယ်။
အားးးးးအမေ့ရေ ကယ်ပါအုံး အားးးးး မိန်းမ ဝသန် မောင် ဆေးရုံလိုက်ပို့ပေးမယ် ဆိုပြီး ဆေးရုံသို့ အမြန်ထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ် ဆေးရုံရောက်တော့ စစ်ဆေးမှုအဆင့်ဆင့်ပြု လုပ်ကြပြီးနောက် ဝသန်ကို အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ခန်းသို့ ပို့လိုက်ကြပါတော့တယ်ဗျာ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျနော်ရင်သွေးလေးပျက်ကျပြီး ခွဲစိတ်ထုက်လိုက်ရပါတော့တယ် ဆေးရုံကုတင်မှာ သတိမလည်သေးတဲ့ ဝသန်ကိုကြည့်ပြီး ကျနော်မျက်ရည်လေးကျရင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးရုံးခန်းသို့ထွက်လာပါတော့တယ်ဗျာ ဝင်ခွင့်ပြုပါ ဆရာ လာပါ ထိုင်ပါဗျာ ဘာများသိချင်လို့ပါလည်း ဒီလိုပါ ဆရာ ကျနော် မိန်းမ ဝသန် ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာလည်း သိချင်လို့ပါ အော် ပြောရမှာတော့ အားနာပါတယ် ရပါတယ် ပြောပါဆရာ အားမနာပါနဲ့ ညီးလေးတို့လင်မယား အိမ်တောင်ကျတုန်းက ကလေးမလိုချင်သေးလို့ အပြင်မှာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဘူးလား ဘာ ဆရာ ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလည်းဗျာ စိတ်ထိန်းအုံး ညီလေး ဆရာတို့အတွေ့အကြုံအရ ပြောရတာပါ။
ညီလေး အခုဖြစ်တဲ့ အခြေအနေက ညီလေး မိန်းမ သန္ဓေထားဆေးအလွန်အကျွံ့သောက်ထားလို့ဖြစ်နိုင်သလို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချထားဖူးလို့ သားအိမ်ကစောင်းနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ညီလေး ညီလေး မိန်းမ ကို နေကောင်းပြီး ဆေးရုံကဆင်းမှသက်သာမေးကြည့်ပါ ညီလေး ဆရာရှင်းပြပြောပြတာ နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ ကျနော် နားလည်ပါပြီ အခု ညီတို့ ကလေးရဖို့ အခြေအနေဖြစ်လာတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် သွေးလုံးဖြစ်ပြီး ကလေးပျက်ကျတာပါ နောက်ထပ် သားသမီးထပ်ရဖို့အခြေအနေသိပ်မရှိတော့ပါဘူး ညီ စိတ်မကောင်းပါဘူး ညီ ဆရာလည်း လုပ်စရာလေးတွေရှိသေးလို့ ညီ အော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ ကျနော်ကို ပြန်ခွင့်ပြုပါအုံး ကောင်းပါပြီဗျာ လိုအပ်ရင် လာခေါ်လို့ရတယ်နော် ကျနော် ခေါင်းငြိမ့်ပြရင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ရုံးခန်းထဲကထွက်လာပါတော့တယ်ဗျာ တောက် ဒေါသစိတ်နဲ့ ခေါက်လိုက်သောကြောင့် လူတစ်ချို့ကျနော်ကို လှည့်ကြည့်သွားကြပါတော့တယ်ဗျာ။
ဆေးရုံဆင်းလို့ အခုတော့ ဝသန်လည်း အိမ်သို့ပြန်ရောက်နေပါပြီ ကျနော်လည်း စိတ်ကိုထိန်းချုပ်လို့နေ့စဉ်ရက်ဆက် အရက်ပုလင်းကိုအဖော်ပြုလို့နေတတ်လာပါပြီ တာဝန်ချိန်လည်း မှုးနေပါပြီ မနက် နေ့လယ် ည အချိန်ဆိုတာမချိန်လောက်အောင်မူးရူးနေပါတော့တယ်ဗျာ။ သာရေးနာရေးလူမှုရေးအရာအားလုံးခေါင်းထဲဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ပါဘူး အရက်ခွက်လေးမော့လို့ ရင်ထဲကိုပူဆင်းသွားမှသွေးသားတွေကလှည့်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့အဆင့်ကို ကျနော် ရောက်နေပါပြီဗျာ မောင် မောင် ဘာလည်း ဘာလည်း နားငြီးတယ် နင့်စကား ငါမကြားချင်ဘူး မပြောနဲ့ မပြောလို့ မဖြစ်တော့ဘူး မောင် မောင်ကိုယ်လည်းမောင်ပြန်ကြည့်အုံး ပိန်ချူံးနေပြီ အရက်သမားလုံးလုံးကြီးဖြစ်နေပြီ သိရဲ့လား ကြာရင် မောင်အသက်ပါတော့မယ် သိရဲ့လား မောင့်ကိုချစ်လို့ ဝသန်ပြောနေရတာပါ မလိုဘူး သေသေ ဝသန် ငါ့မျှော်လင့်ခဲ့တာမိသားစုဘဝလေးပါ အပြစ်ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး နင့်ပွင့်လင်းစွာ ငါ့ကိုမပြောပြခဲ့တာ။
ငါ့စိတ်ထဲအရမ်းနာကျင်ရတယ် ဝသန် နင့်လည်း ငါ့နဲ့ပတ်သက်လို့အရှက်သိက္ခာမဲ့ရသလို ငါလည်း နင်နဲ့ပတ်သတ်လို့ မိဘတွေရဲ့စွန့်ပယ်ခြင်းကို ခုထိ ခံနေရတုန်းပါပဲ ဝသန် နင်ငါ့ကိုညာခဲ့တယ် လုံးဝဖွင့်မပြောခဲ့ဘူး ငါဝမ်းနည်းလိုက်တာ ဝသန် နင် ငါ့အပေါ် သိပ်ကိုရက်စက်လွန်းတယ် ဝသန် ရက်စက်တာ မဟုတ်ဘူး မောင် မပြောချင်လို့ မျိုသိပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး မောင် မောင်မုန်းသွားမှာ မောင်ဝသန်ကိုထားသွားမှာကြောက်လို့ပါ မောင်ကိုသိပ်ချစ်လို့ဖွင့်မပြောပြရက်ခဲ့တာပါ မျက်ရည်လေးကျရင်း ပြောပြနေတဲ့ ဝသန်စကားလေးများ ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက် နဲ့ အရက်ကိုသာငှဲ့လို့ကျနော် သောက်လိုက်ပါတော့တယ် ကျမ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ပညရေးကောလိပ်ကျောင်းတတ်တယ်။ အဲဒီမှာ မျိုးမင်းလတ် ဆိုတဲ့ သူနဲ့ဆုံခဲ့တယ် မောင် သူလည်းဝသန်တို့လိုပဲ ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းလာတတ်တဲ့သူပါပဲ ခင်မင်ရင်းနှီးကြရင်း သူငယ်ချင်းအဆင့်ကျော်လို့ သမီးရည်းစားတွေဖြစ်ကြတယ်။
နောက်တော့ ကျောင်းပိတ်ရက်တစ်နေ့ သူနဲ့ကျမ စိတ်ရဲ့အလိုကို လိုက်မိရင်း လွန်ကျူးမိကြပါတယ် မျိုး ဝသန်ကို တကယ်ချစ်တာနော် သေချာလို့လား သေချာပါတယ် ဝသန်ရယ် ဝသန်ကိုပစ်မသွားရဘူးနော် မျိုး စောက်ဖုတ်ထဲ ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့မျိုးရဲ့လီးက ဒုတ်ကနဲ့ဆောင့်ထည့်လိုက်သောကြောင့် ကျမလည်း အားးးးးလို့အော်မိရင်း မျိုးရဲ့လည်းပင်းကိုအတင်းဖက်လို့ထားမိသွားပါတော့တယ်ရှင်။ တဖတ် ဖတ် လိုးနေတဲ့ မျိုးကလည်း ကျမနို့ကိုငုံစုပ်ရင်း ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေသောကြောင့် အားးးး ကောငွးးးးတယွ မှိုးးးးးးအားးးးးအငွးးးးဟငွးးးး ဝင်နေသောလီးက စောက်ဖုတ်ထဲ တင်းကျပ်စွာ ဝင်လာပြီး အတွင်းသားနံရံလေးကိုပွတ်ဆွဲသွားလိုက်တိုင်း ကျမ လောကကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်သွားမတတ်ကောင်းလိုက်တာရှင် အားးးးးးလားးးးးသပေါပှီ အီးးးးးအအအရှီးးးးးဟူးးးး လိုး လိုးကွာ မျိုးရေ အားးးလားးးး အမေရေ ကောင်းတယ် ဆောင့် ဆောင့် ဖတ် ဖတ် ဖန်းးးဖန်းးးးးး အော်ညီး ဆောင်သံလေးများက ကြည်နူးစရာလေးပါပဲရှင်။
အား…. ဝသန်ရေ ကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်ကွာ ကောင်းရင် လိုးကွာ မျိုး ဆောင့် ဆောင့်လိုးကွာ အားးးးးးအင့် အင့် အင့်ဟာ အားးးးးမျိုး သေပါပြီ ကောင်းတာ အားးးးးအင်းးးးး ကျမ တကယ်ကို လောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်လောက်အောင်ကို ကောင်းလိုက်တာရှင် မျိုး တစ်ချက်ချက် ဆောင့်ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း အသက်ရှုပါရပ်တန့်သွားသလို့ ကောင်းလိုက်တာရှင် အားးးးးးး မျိုးရေ ဝသန် ပြီးးးးးပြီးးးတော့မယ် အိုးးအားးး အင့် အင့်ဟာ ဖန်းဖန်းးးဘုန်းးဖတ် ဖန်းးးးးးးး ဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းတွေအောက် စောက်ဖုတ်ကအောင့်နေလောက်အောင့် လူးလိမ့် အလိုးခံနေရင်းးး အားးးးဝသနွ ဝသနရွေ အားးးးးးးအားးးးးးးး အားးးးးးးမှိုးရေ အားးအားးးးးး လီးနဲ့စောက်ဖုတ် ပြားနေအောင်ဖိကပ်ထားရင်း မျိုး လရေ တွေ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ တသောသောပန်းထည့်လိုက်ပြီး နှစ်ဦးသားကျေနပ်စွာဖတ်ထားရင်း အချစ်တွေပြည့်နှက်လို့နေပါတော့တယ် အစရှိနောင်နောင် ဆိုသလို။
ကျမနဲ့မျိုး ကျောင်းပိတ်ရက်မဟုတ်လည်းအတန်းလစ်လို့ တခါတလေ အချစ်နယ်မြေတပ်ကာတပ်ကာ ချဲ့လို့နေပါတော့တယ်ရှင် မျိုး ကျောင်းတွေပိတ်တော့မယ်နော် ဟုတ်တယ်နော် ဝသန် ဝသန် မျိုးနဲ့ခွဲမနေချင်တော့ဘူးကွာ တူတူပါပဲ ဝသန်ရယ် ကျောင်း ပိတ်ပြီး ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရင် ဝသန်နဲ့မျိုး ခိုးပြေးကြမယ်နော် အခုတော့ ခဏလေး အိမ်ပြန်လိုက်အုံးမယ်နော် ဝသန် ဝသန် ကို သနားပါအုံးနော် ဝသန် ကိုပစ်မသွားပါနဲ့နော် ပစ်မသွားပါဘူး ဝသန်ရယ် ဝသန်ကို ဘယ်လောက်ချစ်သလည်းဆိုတာ သိရဲ့သားနဲ့ ထွက်သွားတဲ့ မျိုး ရဲ့နောက်ကျောလေးကိုကြည့်ရင်း ကျမလည်း မိဘများရှိရာမြို့လေးသို့ကားစီးလို့ပြန်သွားပါတော့တယ်ရှင်။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ ရာသီလည်းမလာတာရက်တွေကျော်လို့ တိတ်တိတ်လေး ဆီးစစ်ကြည့်လိုက်တော့ ဆီးစစ်တံလေးကိုကြည့်ရင်း ကျမ ငိုင်နေပါပြီရှင် ရင်တမမနဲ့စောင့်စားရင်း ကျောင်းဖွင့်ရက် ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့လမ်းမနဲ့ဆိုင်တန်းတွေမှ။
ာ မျိုးကို အပြေးအလွားရှာနေမိပါတော့တယ်ရှင် စာသင်ချိန်လည်း စိတ်ကမပါ ညနေစောင်းကျောင်းထဲ မျိုး ကို သာလိုက်ရှာမိနေပါတော့တယ် ရင်တွေပူပြီး အအေးဆိုင်ထဲ အအေးသောက်ရင်းထိုင်နေစဉ် ဝသန် အော် သူငယ်ချင်း နှင်းနှင်း အအေးသောက်မလား ငါတိုက်မယ် မှာလေ မမှာတော့ဘူး ဝသန် ငါနင့်ကိုပြောစရာရှိလို့ ဝင်လာတာ နင့်ကိုတွေ့ချင်နေတာ ပြောချင်နေတာကြာပြီ ပြောလေ နှင်းနှင်း အားတော့နာတယ် ဒါပေမဲ့ ပြောမှဖြစ်မယ်ထင်လို့ငါပြောတာနော် ဝသန် အေးပါဟာ ပြောပါ မျိုးမင်းလတ် အိမ်တောင်ကျသွားပြီး ဝသန် ဘာ ခေါင်းတွေချာချာလည်ကျမမူးမိုက်သွားပါတော့တယ်ရှင် သေချာလို့လားဟာ နှင်းနှင်း ငါနဲ့ မျိုးမင်းလတ် တို့က တမြို့ထဲပါ သူ့မင်္ဂလာဆောင် ငါကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တာပါ ဝသန် နင်သိအောင် ငါလာပြောပြတာ နင်သူ့ကို စောင့်နေမှာစိုးလို့ မျိုးမင်းလတ် ကျောင်းလည်းမတတ်တော့ဘူး။
စီးပွားရေး ပဲလုပ်တော့မယ်လို့ကြားတယ် ဝသန် ငါသွားတော့မယ် ထွက်သွားသော နှင်းနှင်းကို ကြည့်ပြီး ကျမ မျက်ရည်တွေတသွင်သွင်စီးကျလာပြီး ရက်စက်လိုက်တာ သိပ်ရက်စက်လိုက်တာ မျိုးရယ် ငါ့ဘဝကို လုပ်ရက်လိုက်တာဟာ ကျမ မိဘ သိက္ခာ ကျမရှေ့ရေး အရှက်သိက္ခာကို ဘယ်သူမှမသိအောင် ဒီကိုယ်ဝန်ကို တောက်…. တော်သေးတာက ဒီမြို့လေးက ကျမ မြို့မဟုတ်တာ သိပ်ကိုကံကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ရှင် မတတ်သာတဲ့အဆုံး ရက်စက်သူ လူမဆန်တဲ့သူ လူတစ်ဦးကြောင့် ကျမ လွယ်ထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို တိတ်တိတ်လေး အရပ်လက်သည်တစ်ဦးနဲ့ဖျက်ချလိုက်ပါတော့တယ်ရှင် ငိုရင်းပြောပြနေသော ကျမ ကို တချက်လေး မောင်လှည့်ကြည့်ပြီး ဝသန် နင်ပြောချင်တာ ဒါပဲလား ငါ့အနားက သွားစမ်းပါ အရက်သောက်ရတာဇိမ်ပျက်တယ် သွား မောင် သွားဆိုသွားပါမယ် ဝသန်အမှားတွေခွင့်လွတ်ပေးပါနော်လို့အယူခံဝင်ရင်း …… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အစရှိနောကျနောငျ